Bus ပျေါက ကွိုကျကုနျးမ - Owl Myanmar News
ဦးကိုကိုကွီး တဈယောကျ ရုံပိတျရကျ Super Sunday မတှတေ့ာ ကွာတဲ့ သူငယျခငျြးနဲ့ ခြိနျထားတာနဲ့ မွီု့ထညျးဘကျ ထှကျလားခဲ့တယျ။ရုံးသှား ရုံးပွနျ ဖယျရီး စီနကေမြလို့လား မသိဘူး YBS စီရတာ တျောတျော တိုငျပတျ။ ကားကလဲ ကပျြလိုကျတာ YBS Bus ထုံးစံ အတိုငျးပေါ့။ စပယျယာက နောကျလူတှေ အဆငျပွအေောငျ အနောကျထဲ တိုးကပြါဆိုတာနဲ့ နောကျထိရောကျအောငျ တိုးလိုကျတယျ။ ဒါ‌ပမေဲ့ အလယျ ကောငျ မှာပဲ ညပျနတေယျ။ အဲ့အခြိနျမှာ ဘေးမှာ မွငျလိုကျ ရတာက ကောငျးမလေး တဈယောကျနဲ့ ကုလားကွီး တဈယောကျ သာယာနတော သှားတှတေ့ယျ။ အဲ့ ကုလားက ပစေုပျစုပျမှ တကယျ့ ပစေုပျစုပျ ညဈနှမျးနှမျး ရုပျကလညျ စုတျပကျြသတျ အဲ့လို့ နှားနို့ပိုတဲ့ ကုလားကွီးဗြာ။‌ ပွီးကောငျးမလေးက တျောခြောခြောလေ လူပုံလေးကလညျး နူဖတျနတောပဲ အသကျနှဈဆယျ အရှယျလောကျ ၃၄”၂၄”၃၆” ဆိုဒျ ဘျောဒီအ‌တျော လှတဲ့သူ ဝတျထားတာက စကပျအတိုလေး ဘလောကျဈလနေဲ့ အတျောကို လိုကျဖကျတယျ။အဲ့လို ကောငျးမလေးနဲ့ ကုလားကွီးနဲ့ မွငျရတာ အဆငျမပွေ လိုကျတာဗြာ။ပွီး ဒီလို ကုလားကွီးကိုမှ မွနျမာအမြိုးသမီး ဖွဈပွီး သာယာနရေလားဗြာ။
ကုလားကွီးက ကောငျးမလေးကို အနောကျကနေ သူလီးကွီးနဲ့ ထောကျထားရငျး ကုလားကွီး လကျက စကပျ အကှဲထဲ ဝငျနတေယျ တှရေ့တယျ။ ကောငျးမလေး အဖုတျကို နှိုကျ‌နတောထငျတယျ ။ နောကျ လကျတဖကျ ကလဲ ကောငျးမလေး တငျပါးတှကေိုနယျနတေယျကောငျမလေး ကမကျြလုံး‌လေး စငျပွီး ဖငျလကေို ကော့ပေးနတေယျ။ဘေးမှာ ကနြျော အပွငျ မသိမသာ ကွညျ့နတေယျ သူတှလေညျး ရှိတယျဗြာ။အဲ့တာကို နှဈယောကျသာ ဘယျသူမှ ဂရုမစိုကျတဲ့ အထာနဲ့ ဖွဈခငျြတိုငျ ဖွဈနကေတြယျ။ ကနြျော ဦးကိုကိုကွီး လညျး မွနျမာမ ခြောခြောလေး ကုလားနဲ့ သာယာနတော တျောတျော တငျသှား မွငျပငျြးကပျသှားတယျ။ တျောတျော ထနျတဲ့ အထနျမပါလား။ရုပျလေ လှသလောကျ လူကအဆငျ့ရှိတယျ ထငျရတဲ့ရုပျနဲ့ ကွိုကျကုနျမ ဖွဈနပေါလား။ကုနျးလညျး ဗမာ ဗမာခငျြးကုနျပါလားဗြာ ကုနျးစရာရှားလို့ ကုလားကို ကုနျးရသလား။ ဗမာလီး လညျး ကွီးပါတယျ ကွိုကျကုနျမရယျလို့ စိတျထညျးက တှမေိနတေယျ။အမွငျမကွညျတာနဲ့ ကနြျောဦးကိုကိုကွီးလညျး ကုလားကို ပစေောငျးစောငျး ကွညျ့ပွီး ဇှတျတိုးလိုကျတယျ။ကုလားလညျး ကနြျော ကွညျ့တော့ မသိမသာနဲ့ ကောငျး‌မလေး ဘေးကနေ နညျးနညျး ရှသှေ့ားတယျ။အဲ့မှာ ကုလားကွီး က သူလီးကွီးနဲ့ ဖငျကွား ထောကျနရောကနေ ဘေးကို ရှသှေ့ား‌ရော့ ကုလားကွီး ခှားသှားတာကို ကောငျးမလေးက သူဖငျကွီး ကို ကုလားကွီး ဘကျလိုကျတိုးပွီး အတငျးကွီး လိုကျကပျနေ‌‌သေးတယျ။ကနြျော ဦးကိုကိုကွီး လညျးပိုတငျသှား‌ပွီးတော့ ကောငျးမလေး နောကျကို ဇှတျနရော ဝငျယူလိုကျတယျ။ပွီးဘေးက ကုလားကွီးကို နညျးနညျး မိုကျကွညျ့ ကွညျ့လိုကျတော့ ကုလား‌က အဲ့နရောကနေ busကား နောကျပိုငျးကို တိုးဝငျသှားတယျ။
ကနြျော ဦးကိုကိုကွီး လညျးစိတျတိုတိုနဲ့ ရှလိုကျတဲ့ ကွိုကျကုနျးမ ရှအုံးဟ ဆိုပွီး အဲ့ကောငျးမလေး ဖငျကွီးကို လကျနဲ့ စုံကိုငျပွီး‌တော့ကို သူဖငျကားကားကွီးကွား ကနြျော လိမျတနျကွီး အတငျးကို ဆောငျ့ထိုးထညျး ထောကျလိုကျတယျ။ ကောငျးမလေးက နောကျကို လှညျ့ကွညျ့လားတော့ ကနြျောလညျး စိပျ‌တိုစိတျပေါကျတာနဲ့ သူနားနား ကိုကပျပွီး လသေံနဲ့ ပွောလိုကျတယျ။ “စောကျကောငျးမ နငျဖငျတျောတျော ယားနလေား အရမျးယှထ နလေား” “ဟိုမှာ လူတှေ အမြာကွီး နငျနဲ့ ကုလာကွီး ဖွဈခငျြသလိုဖွဈနတော ကွညျ့နတော ရှကျရမှနျမသိဘူး” “လီး အရမျးဆာနလေား စောကျရှကျမရှိဘူးလား စောကျကောငျးမ” “ဟိုက ဖယျသှားတာတောငျ နငျက ဖငျကွီး လိုကျပွဈကုနျးပေးနေ‌သေးတယျ စောကျရှကျ နညျးနညျးမှ မရှိဘူး” “ကုနျးစရာ အဲ့လောကျရှားလား စုတျပတျြသပျနတေဲ့ ကုလားကွီး မှ ကုနျးရသလား” “ဗမာလညျးလီးပါတယျ ဖာသညျမ အဲ့လောကျ လီးဆာနရေငျ နငျ့ စောကျပကျပွဲကှဲ ထှကျသှားအောငျ ငါ့ဗမာလီးကွီးနဲ့ လိုးပေးမယျ” “လီးနဲ့ ထောကျခံခငျြ‌နတော မဟုတျလား နငျ့ဖငျကွီးကော့ပွီး ကုနျး‌ပေးထားစမျး ငါ့လီးကွီးနဲ့ နငျဖငျကွား ထောကျပေးမယျ “ “အဖုတျလညျး တျောတျော ယားနတေယျမလား အရညျတျောတျော ထှကျနလေား မှနျစမျး ကုလားကွီး ကိုငျသှားတဲ့ နငျ့စောကျဖုတျ စမျးကွညျ့ရအောငျ”
ကနြျောလညျး ပွောပွောဆိုဆို ကောငျးမလေး စကပျ အကှဲထညျး ကနြျောလကျကွီး လြိုသှငျးပွီး အဖုတျကို အုပျကိုငျလိုကျတယျ။ဟာ! ဒါလောကျ ပွောဆို‌ခံနရေတာတောငျ အရညျထှကျ‌ နိုငျသေးတယျ။တကယျ မနိုငျတဲ့ အထနျမ ပါလား။ ကောငျးမလေးကို ကွညျ့လိုကျတော့ မကျြနှာက ရှကျပွီး ရဲတှပျ နီမွနျတော့ နသော ရှကျတော့ ရှကျတယျ ယှလညျးယှတယျ ခံလညျး ခံခငျြတယျ ထငျတယျ။ခုန ကုလားကွီးနဲ့ ဖွဈနတေော့ မရှကျဘူးလား မသိဘူး။ကုလားကွီးနဲ့ အကွောငျးတှေးမိတော့ ပွနျ‌တငျးသှားပွီး ထပျနငျ့နငျ့သီးသီး ပွောမိပွနျတယျ။ “စောကျကောငျးမ ခုမှရှကျသလိုပုံနဲ့ ကုလားကွီးကို ဖငျကုနျပေးပွီး လူတှေ ဝိုငျးကွညျ့ ခံ‌နရေတုနျကြ ရှကျရမှနျ မသိဘူးလား” “နငျတျောတျော ယှတယျနျော ဒီလောကျပွောခံရတာတောငျ စောကျဖုတျကွီး ကအရတေောကျတောကျ ကနြနေိုငျသေးတယျ” ” စောကျဖုတျကွီးကလညျး အကွီးကွီးပဲ စောကျရညျတှလေဲ ရှဲနဈနတောပဲ” ” နငျ တျောတျော ခံခငျြနပွေီးလား” ကွိုကျကုနျမက “မပွောပါနဲ့”…..
လို့ —လသေံတိုးတိုးနဲ့ ပွနျပွောလာတယျ။ ကနြျောလညျး စောကျမွငျကပျကပျနဲ့ “ဘာ မပွောပါနဲ့‌လညျး လီး မပွောပါနဲ့လား” “လူတကား အထောကျခံတဲ့ ကောငျးမ ကမြား” “နငျ့ ဖငျ ထောကျထားတဲ့ ငါ့လီးကွီး ကို ကွိုကျလား” “ငါ့ လီးကွီးနဲ့ နငျ့ယားနတေဲ့ အဖုတျကွီး ပွဲအောငျ လိုးပေးရမလား” “နငျ့နောကျ ကုလားကို ဖငျမကုနျး တော့အောငျဗမာလီး ကွိုကျသှားအောငျ ဗမာလီးမှ ဗမာလီး ဖွဈအောငျ လိုးပေးမယျ ဖာသညျမ”– လို့ပွောလိုကျတော့ “တောငျးပနျးပါတယျ” လို့ ပွနျပွောလာတယျ။
“တောငျးပနျးမနနေဲ့ ဖာသညျမ နငျမနနေိုငျ မထိုငျနိုငျ ယားနတေဲ အဖုတျကို အယားပွအေောငျ လုပျပေးရသေးတာပေါ့” ပွောပွော ဆိုဆို ကနြျောလကျကို စောကျရညျတှေ ခြှဲနတေဲ့ အဖုတျကို အုပျကိုငျးထားရာကနေ ရှဲစိုနသေော အဖုတျအကှဲကွောငျး တလြှောကျ ထိသညျဆိုရုံလေး ပှတျသပျ ပေးလိုကျတယျ။ ကောငျးမလေး ဒူးတှပေါမခိုငျခငျြသလို ဖွဈသှားပုံရတယျ။ ပွီးအဖုတျထညျးကို လကျနှဈခြောငျပူ ထိုးထညျ့ပွီး အတငျး တဇှတျဇှတျ စောငျ့ထိုး ပေးလိုကျတယျ။ကွိုကျကုနျမ တျောတျောယှတယျ အရညျးတှေ တစိမျ့စိမျ့နဲ့ကို စိမျ့ကလြားတယျ။ “ခံလို့ကောငျးလား စောကျပကျပွဲမ” “နငျ့စောကျပတျကွီးကို ငါလကျနဲ့ လိုးပေးတာ ကောငျးလား ခံလို့ ကွိုကျလား” “နငျ အလိုးခံရတာ ကွိုကျရငျ ကားပျေါက ဆငျးမှ ငါလီးကွီးနဲ့ နငျ့စောကျပကျကွီး မယားနိုငျအောငျ စောကျပကျထညျး ဖှာထှကျအောငျကို လိုးပေးမယျ”— လို့ပွောနတေုနျး ကွညျ့လိုကျတော့ ဆငျးရမယျမှတျတိုငျးရောကျခါနီးနတောနဲ့ အပေါကျဝကို တိုထှကျလာလိုကျပွီး ကပြာကယာ ပွေးဆငျးလိုကျတယျ။‌ကွိုကျကုနျမက လိုကျဆငျးလာတယျ။ဟာ ဒီစောကျဖာသညျမက တျောတျော မနိုငျတဲ့ ဟာမ ပါလား ဟ။‌စောငျ့မွငျကပျလို့ လိုးပေးမယျ ပွောတာကို လိုကျလားတယျ။ တျောတျော အံဩမှငျသပျ သှားတယျ။
ကောငျးမလေးက တျောတျောလှလှ ရုပျသနျ့သနျ့လေးပါ ကွိုကျကုနျး ဖွဈနတောက လှဲရငျပေါ့။ လိုးတော့ကောငျးမှာပါလေ နညျးနညျးသနျ့‌လောကျမှာပါ။ကနြျောက ဖာသညျတှေ ကွိုကျကုနျတှေ ခတြာ မဟုတျဘူး။ ခုက ပွောထားပွီးသာလညျးဖွဈ ကွိုကျကုနျမ ကလညျး တျောတျော ခြောလို့ သနျ့လို့သာ ဇှတျလညျး လိုကျလားတာဆိုတော့ လိုးတော့ပေးရမှာပေါ့။နညျးနညျးတော့ ညငျးဆဲလိုကျအုံးမယျ အတှေးနဲ့— “စောကျကောငျးမ တျောတျော ခံခငျြနပွေီးလား ငါလိုးပေးတာကို ခံခငျြလို့လား ငါ့လီးကွီးကို ကွိုကျလို့လား” “ငါလိုးတာ ခံခငျြရငျ ဒီနရောမှာ‌စောငျ့ နောကျနှဈနာရီလောကျ ကွာရငျ ပွနျလာခဲ့မယျ ကွားလား” ကနြျောလညျး သူငယျခငျြးနဲ့ ခြိနျထားတာ ရှိသေးတယျ လူကမအားဘူးလေ။ပွောလညျး ပွီရော့ ကနြျောလညျး လှညျ့ထှကျလာခဲ့လိုကျတယျ။
ကမြ နာမညျက မိုးသဲဖွူပါ။ကမြ မှာခဈြသူ ရှိပါတယျ။ကမြရဲ့ ကိုကိုပေါ့။ဒီနကေ့ တော့ ကမြရဲ ကံဆိုမူလား ကံကောငျးမူလား ဘာလား မသိတဲ့ နေ့‌တနပေ့ေါ့။ဒျေါလေးက သူတိုကျခနျး အရောငျးအဝယျ အတှကျ စာခြုပျတှေ အမွနျလာပို့ပါဆိုတော့ ကိုကို က သူလိုကျပို့မယျ ဆိုပွီး လိုကျပို့တယျ။ လမျးတဝကျလညျး ရောကျရော့ ကိုကိုဆီ ဖုံးဝငျလာတယျ အလုပျကိစ်စ အရကွေီး‌နလေို့ လှမျးချေါတာ ကိုကိုလညျး မိုးကို လှညျ့‌ကွညျ့နတေော့ ကိုကို ကို့ သနားတာနဲ့ “ကိုကို သှားလေး မိုး ဒီနားကနေ ကားငှားပွီး ဆကျသှားလိုကျမယျ” “မိုး ရလို့လား” လို့မေးတော့ “အမယျလေး ကိုကို ရယျ ရနျကုနျသူပါ” “ဒါဆို ကိုကို သှားမယျ အရကွေီးနလေို့နျော ဂရုစိုကျသှား ကားငှားသှားနျော” ပွောပွီး ကိုကို စိတျမခတြခနြဲ့ ထှကျသှားတယျ မိုးလညျး taxi ငှားဖို့စောငျ့နရေငျ ကိုကို ခထြားတဲ့ နရောက 🚖ကားတျောတျောနဲ့ မလားတဲ့‌ နရော ဖွဈနတေယျ စာခြုပျကလညျးအရေးကွီး သှားပေးရမှာ ဆိုတော့ မထူးပါဘူး ဆိုပွီး နီးတဲ့ မှတျတိုငျ သှားလိုကျတယျ။မှတျတိုငျ‌ ရောကျတာနဲ့ YBS Bus တဈစီး ဆိုကျလာပွီး ကိုယျသှားမယျ့နရော လမျးကွောငျးတညျ့တာနဲ့ bus ပဲ တကျစီးလိုကျတယျ။အရငျက bus ကားက စီးနကေမြဟုတျ ခုက အရေးကွီးနလေိုသာ စီးရတာ။
ကားပျေါမှာ လူတှကေ အပွညျ့ပဲလေ ။ စပါယျယာအျောသံကွောငျ့ မိုးလဲ အတှငျးထဲတိုးသှားပီး လကျကိုငျကှငျးကို လကျတဈဖကျနဲ့ ကိုငျရငျး ခန်ဓာကိုယျကိုထိနျး‌နရေတယျ။ ကားသမားကလဲ မောငျးခကျြဆိုတာ မိုးမှာ မနညျးထိနျးနရေတာ။ နောကျလကျတဈဖကျက စာခြုပျဖိုငျတှကေို ပိုကျထားရတယျလေ ။ အဲအခြိနျမှာပဲ မိုးရဲ့ တငျပါးပျေါမှာ အထိအတှတေ့ဈခုခံစားလိုကျရတယျ ။ မိုးရှကျလဲရှကျ ကွောကျလဲကွောကျပမေဲ့ မတျောတဆ လာထိတာနမှောပါလို့ တှေးလိုကျ မိတာ အမှနျပါ။ အနောကျကလကျက သှေးတိုးစမျးတဲ့အနနေဲ့ မိုးတငျပါးကို လကျဖမိုးနဲ့ ထိလိုကျ လကျဖဝါးနဲ့ ဆှဲပှတျလိုကျ လုပျနတော မိုးစိတျထဲ တဖွညျးဖွညျး ကွောကျစိတျတှေ ဝငျလာတယျ။ အဲတာနဲ့ အနောကျလှညျ့ကွညျ့တော့။ ပစေုပျစုပျ ညဈနှမျးနှမျး ရုပျကလညျ စုတျစုတျပတျြပတျြ နှားနို့ပိုတဲ့ ကုလားကွီး။ မိုးစိတျထဲ ကတုနျတရငျတှဖွေဈလားတယျ ပစေုပျစုပျ ကုလားကွီးက လုပျခံနရေတာ။‌ကွောကျကွောကျနဲ့ ငွိမျနမေိတာ။ကုလားကွီးကလဲ မိုးငွိမျနမှေနျးသိတော့ စကပျပျေါကနေ သသေခြောခြာကို ပှတျနတော။ တဖွညျးဖွညျးနဲ့ ပိုဆိုးလာပီး မိုး ဖငျတှကေို နယျပါလရေော။ မိုး ရှကျပမေဲ့ ဝနျခံရရငျ မိုး အဖုတျ ထဲကနေ အရညျတှစေိမျ့နတော ။ အဲထကျပိုဆိုးတာက သူ့လကျက တဖွညျးဖွညျးနဲ့ မိုးဖငျကွားထိ ဝငျလာပွီး လာပှတျနတော ။
မိုးစိတျတှေ ဘယျလိုမှ ထိနျခြုပျလို့ မရတော့ဘူး။ဘာမှမသိတော့ဘူး အဲ့ဒီစိတျက လှမျးမိုးသှားပွီး။ အဲ့အခြိနျ ကုလားကွီးက အဖုတျနိူကျနတေဲ့လကျကော ထောကျထားတဲ့ သူ အတနျကွီးကော နောကျဆုတျသှားတယျ။မိုး စိတျတှေ ဘယျလိုဖွဈသှားမှနျ မသိဘူး လုံဝ အကှားမခံပဲ လိုကျကပျနမေိတယျ။ အဲ့အခြိနျ ဘေးက‌နေ ပိုငျစိုပိုငျနကျ လကျတစုံက မိုးဖငျကွီးကို လကျနဲ့ စုံကိုငျပွီး သူလိမျတနျကွီးကို မိုးဖငျကားကားကွီးကွား အတငျးလာ ဆောငျ့ထိုးထညျးတယျ။ လူတကိုယျလုံး ဖဉျြးကနဲ့ ဖဉျြးကနဲ့ ပူထူပွီး တုနျဆငျးသှားတယျ။အဲ့ဒီ မိုးဖငျကို လကျနဲ့ကိုငျပွီး ‌ ထိုးထညျးတဲ့လူ လိငျတနျကွီးက ကုလားကွီး လိငျတနျကွီးထကျ တုပျပွီး ကွီးတယျ။ပွီး အဲ့လူကွီးက မိုးဖငျကွီးကိုငျပွီး ထိထိမိမိ ပယျပယျနယျနယျ ထိုးထညျ့နတော ကမြ ရမကျ မီးတောကျကို လောငျစားကောငျးကောငျးနဲ့ ရို့လိုကျသလိုပါပဲ။ကမြ မသိမသာ လှညျ့ကွညျ့မိတယျ ဆိုရငျပဲ အဲ့လူကွီးက
“ကုလားကုနျမ xxxအပကျြမxxxလူတှကွေားမှာ ခံနတေယျဟာမxxxဗမာလီးနဲ့လိုးမယျxxxဖာသညျမxxxxကုလာကွီး ကိုငျသှားတယျစောကျဖုတျ ကိုငျကွညျ့မယျ” ဆိုပွီး ကမြကို ပဈြပဈြနှဈနှဈ ပွောနတေယျ။ အဲ့ လူကွီးက ပွောပွောဆိုဆို မိုး စကပျ အကှဲထညျး လကျကွီးသှငျးပွီး အဖုတျကို အုပျကိုငျလိုကျတယျ။ကမြ အရညျတှရှေဲ နတော အဲ့လူကွီး သိသှာပွီး။ ကမြ မကျြနှာက ရှကျပွီး ရဲတှပျ နီမွနျနတေယျ။နောကျကလူကွီး စကားတှကေ ကမြ ရငျကို ဓားထကျထကျနဲ့ မှနျနသေလို ခံစားရ ခကျပါတယျ။အဲ့တာထကျ ပိုဆိုးတာက အဲ့တာတှနေားထောငျးရငျ အဖုတျထညျးက အရညျတှေ စိမျ့စိမျ့ထှကျနတောပါပဲ။အဲ့လူကွီးက ရှကျနတော ကိုလညျး နငျ့နငျ့သီးသီး ပွောပွနျတယျ။ “စောကျကောငျးမ ခုမှရှကျသလိုပုံနဲ့ ကုလားကွီးကို ဖငျကုနျပေးပွီး လူတှေ ဝိုငျးကွညျ့ ခံ‌နရေတုနျကြ ရှကျရမှနျ မသိဘူးလား”
“နငျတျောတျော ယှတယျနျော ဒီလောကျပွောခံရတာတောငျ စောကျဖုတျကွီး ကအရတေောကျတောကျ ကနြနေိုငျသေးတယျ” ” စောကျဖုတျကွီးကလညျး အကွီးကွီးပဲ စောကျရညျတှလေဲ ရှဲနဈနတောပဲ” ” နငျ တျောတျော ခံခငျြနပွေီးလား” ကုလားကွီးနဲ့လညျး သူအတနျကွီးနဲ့ အထောကျခံရပွီးပွီး။စောကျဖုတျလညျး ကုလာကွီး အကိုငျခံရပွီးပွီး။လူတှလေညျး ကမြကိုလုပျခငျြသလို လုပျတာကို ဝိုငျကွညျ့ခံနရေတယျ။ နောကျကလူကွီးက ကမြကို အပကျြမ အယှမ ထငျပွီးလုပျခငျြသလိုလုပျ ခငျြရာပွောနတေယျ။ဒါပမေယျ့လညျး မသိစိတျက အဲ့တာကို သာယာနမေိတယျ။မဖွဈသငျ့မှနျ သိပေးမဲ့ပွောလေ စိတျကပိုထလေ၊လုပျခံရလေ စိတျကပိုထလေ ဖွဈနတေယျ။ကမြ ဘယျလို မိနျးမ ဖွဈနပွေီးလညျး ။ “မပွောပါနဲ့” စိတျတှေ ထိနျးမရလို့ ‌အဲ့လိုပွောမိခါမှ ပိုဆိုးဆိုးဝါးဝါး ပွောခံရပွနျတယျ။ “ဘာ မပွောပါနဲ့‌လညျး လီး မပွောပါနဲ့လား” “လူတကား အထောကျခံတဲ့ ကောငျးမ ကမြား” “နငျ့ ဖငျ ထောကျထားတဲ့ ငါ့လီးကွီး ကို ကွိုကျလား” “ငါ့ လီးကွီးနဲ့ နငျ့ယားနတေဲ့ အဖုတျကွီး ပွဲအောငျ လိုးပေးရမလား” “နငျ့နောကျ ကုလားကို ဖငျမကုနျး တော့အောငျဗမာလီး ကွိုကျသှားအောငျ ဗမာလီးမှ ဗမာလီး ဖွဈအောငျ လိုးပေးမယျ ဖာသညျမ”–
လို့ပွောလာတော့ “တောငျးပနျးပါတယျ” လို့ပွောမိတယျ ဟုတျတယျ ကမြစိတျတှေ မထိနျးနိုငျတော့ပါဘူး‌လေ။
“တောငျးပနျးမနနေဲ့ ဖာသညျမ နငျမနနေိုငျ မထိုငျနိုငျ ယားနတေဲ အဖုတျကို အယားပွအေောငျ လုပျပေးရသေးတာပေါ့” ပွောလညျး‌ပွော အဲဒီးလူကွီး လကျကွီးက စောကျရညျတှေ ခြှဲနတေဲ့ အဖုတျကို အုပျကိုငျးထားရာကနေ ရှဲစိုနသေော အဖုတျအကှဲကွောငျး တလြှောကျ ထိသညျဆိုရုံလေး ပှတျသပျ ပေး‌နတေယျ။ ကမြ ဒူးတှပေါမခိုငျခငျြသလို ဖွဈသှားတယျ။ ပွီးအဖုတျထညျးကို လကျနှဈခြောငျပူ ထိုးထညျ့ပွီး တဇှတျဇှတျ စောငျ့ပေးလားတယျ။အရညျးတှေ စိမျ့စိမျ့ကပြွီး ဘယျနှဈကွိမျလောကျ ပွီးလို့ပွီးမှနျမသိပါဘူ။ကမြလညျး အရမျးကောငျးနတောနဲ့ အသံထှကျမှာဆိုးလို့ အံကွိတျနရေတယျ။ “ခံလို့ကောငျးလား စောကျပကျပွဲမ” “နငျ့စောကျပတျကွီးကို ငါလကျနဲ့ လိုးပေးတာ ကောငျးလား ခံလို့ ကွိုကျလား” “နငျ အလိုးခံရတာ ကွိုကျရငျ ကားပျေါက ဆငျးမှ ငါလီးကွီးနဲ့ နငျ့စောကျပကျကွီး မယားနိုငျအောငျ စောကျပကျထညျး ဖှာထှကျအောငျကို လိုးပေးမယျ” ပွောပွီး အဲ့လူကွီးထှကျသှားတယျ။ကမြလညျး ကွညျ့လိုကျတော့ ဆငျးရမယျမှတျတိုငျး ရောကျလို့ ကပြာကယာ ပွေးဆငျးလိုကျတယျ။‌ဟငျး သှားပွီး အဲ့လူကွီးက ဒီမှတျတိုငျမှာ ဆငျးတာပါလား။‌ယောငျးရမျးပွီး အဲ့လူကွီး ငှေးကွညျ့မိနတေုနျး —
“စောကျကောငျးမ တျောတျော ခံခငျြနပွေီးလား ငါလိုးပေးတာကို ခံခငျြလို့လား ငါ့လီးကွီးကို ကွိုကျလို့လား” “ငါလိုးတာ ခံခငျြရငျ ဒီနရောမှာ‌စောငျ့ နောကျနှဈနာရီလောကျ ကွာရငျ ပွနျလာခဲ့မယျ ကွားလား” ပွောလညျး ပွီးရော့ အဲ့လူကွီးလညျး လှညျ့ထှကျသှားတယျ။ပွောခံလိုကျရတဲ့ စကားကွောငျ့ မိုးမှငျတကျသှားတယျ ။ ကမြကပဲ အရှကျမရှိ ခံခငျြလို့ လိုကျလားတယျ ထငျသှားပွီ။ ကမြလဲနရောကမရှနေို့ငျတော့လောကျအောငျဖွဈသှားတယျ။လူက ရှကျပွီး ပူထူ‌နတေယျ။ကမြ အျောငိုခငျြစိတျပေါကျတယျ တကယျပါပဲ။ ဘာပဲဖွဈဖွဈ အပွနျကြ ကိုကို လားကွိုးနိုငျရငျ နိုငျမှာပါ။အဆငျမပွရေငျ taxi နဲ့ ပွနျမယျ။‌နောကျဆုံး ဒီမှတျတိုငျး မလားပဲ တခွား မှတျတိုငျ သှားရငျ ပွနျမ‌တှရေ့တော့ပါဘူး။ငါလညျး လိုငျးကားbus မှ စီတာမှမဟုတျတာ ဒီလူ ဒီအဖွဈအပကျြက ကမြကို ဘယျသူမှ သိတာမှ မဟုတျတာလို့ တှေးပွီး ကိုယျဘာသာ စိတျဖွသောအောငျ တှေးရငျနဲ့ ဒျေါလေးစီ လြောကျလားခဲ့ပါ‌တော့တယျ။
ဒျေါလေးဆီက ပွနျလားတော့ အားတဈခုခုက မိုးကို အဲ့လူကွီးဆီ တှနျးပို့နသေလိုပဲ။ အဲလိုနဲ့ အဲလူကွီးနဲ့ နောကျဆုံးဆုံခဲ့တဲ့ မှတျတိုငျဆီကိုရောကျလားပါတော့တယျ။အဲ့လူကွီး ကရှိမနပေါဘူး။ကိုကို ဆီ ကိုလညျး ဖုံးဆကျလာ မကွိုးခိုငျမသလို။taxi လညျးမငှားဖွဈ။ bus ကားလာလညျး တကျမစီးဖွဈ ဘာလုပျလို့ လုပျမိနမှေနျမသိ ရပျနမေိတယျ။ ဦးကိုကိုကွီး လညျး သူငယျခငျြးနဲ့တှပွေီ့း ပွနျမယျဆို‌ပွီး ခုနမှတျတိုငျကို ပွနျထှကျလားခဲ့တယျ။ကွိုကျကုနျးမလေး အကွောငျးတှေ မိပေးမယျ စောငျ့နမေယျ လိုတော့ မထငျမိ‌တော့ဘူး။မှတျတိုငျလညျး ရောကျရော့ ကွိုကျကုနျမလေးက ရပျစောငျ့ နတေယျ။‌တျောတျော ခြီးကြူးရမယျ စအကွာကွီးတောငျ စောငျ့ပေးနသေေးတယျ။ တခွာသူနဲ့ လိုကျမကုနျပဲ ငါစောငျ့နသေားဟ။ငါ့လီးကွီး ကွိုကျသှားတာနမေယျ။တျောတျောယားနလေို့ ဖွဈမယျ။ရောကျလာမှတော့ မတတျနိုငျဘူး ဖာမခပြမေ့ယျ။ဒီ ကွိုကျကုနျမလေးကတျောတျော သနျ့ပါတယျ။
ဦးကိုကိုကွီးလညျး ပွုံးလိုကျရငျး စောငျ့နတေယျ့ ရှကျသလိုလို ခေါငျးကိုငုံ့ပွီး ရပျနတေဲ့ကွိုကျကုနျးမ‌ကို ဘာမှပွောမနတေော့ပါဘူး လကျကို ဆှဲ‌ချေါပီး taxi ငှားလိုကျတယျ။ ပွီးတော့ အနီးဆုံးတညျးခိုခနျးကို သှားလိုကျတယျပေါ့ ။ တညျးခိုခနျးထဲရောကျတော့မှ ကွိုကျကုနျးမ ကို‌သခြောကွညျ့မိတော့တယျ တျောတျောဆိုမှ တျောတျော ခြောခြောလှလှလေး ရုပျလေးက မသိရငျ တကယျ့ အဆငျအတနျးရှိရှိလေး ဘာလို့မြား လူတကား နဲ့ လိုကျခံ‌နလေညျး မသိဘူး။ကိုယျလုံးကိုယျပေါကျကလညျး ပွောစရာ မရှိ ဝဠျ‌ကွှေးလား မသိဘူး။ငယျငယျလေး ဆိုတော့ သနျ့‌လောကျပါတယျ။ ကှနျဒုံမသုံးတော့ဘူး ပလိနျပဲ ခမြယျကှာ လို့ ဆုံးဖွတျလိုကျတယျ။ ကွိုကျကုနျမကို အနား ဆှဲချေါလိုကျရငျ နို့လတှေကေို ကိုငျကွညျ့မိတယျ။မခငျြမရဲ ဖွဈလားတာနဲ့ ဖငျကို လကျဝါကွီးနဲ့ တဖွနျးဖွနျး သုံးခကျြလောကျ ရိုကျလိုကျတယျ။
ဖွနျး—ဖွနျး—ဖွနျး… ကွိုကျကုနျးမ က ငွိမျးနတောပဲ မိုကျတယျဟ စိတျကွိုကျလိုး လိုးလို့ရလောကျတယျ လို့တှေးရငျ မေးလိုကျမိတယျ။ မငျး နာမညျး ဘယျလိုချေါလညျး ” မိုးသဲဖွူပါ” “လူလေးကော နာမညျလေးကော လှသာပဲ” “နငျ ဒီလို လိုကျကုနျးနတော ကွာပွီးလား” “ရှငျ” “ကွိုကျကုနျဖွဈနတော ဘယျလောကျကွာပွီးလညျး မေးတာ” “ကမြ အဲ့လို မိနျးမ မဟုတျပါဘူး” “လီး မဟုတျပါလား လူကွားထညျး လူတှကွေညျ့နတောတောငျ နငျမရှကျမကွောကျ အလုပျခံ နသေေးတာ” “မဟုတျပါဘူး” “ဘာ မဟုတျပါဘူးလညျး မေးလိုကျရငျ ဝနျခံတာ မရှိဘူး” ဘယျသူမှနျ မသိတဲ့ လူနဲ့ ခံခငျြလို့ စောငျ့နပွေီးတညျးခိုးခနျတောငျး လိုကျလာပွီးမှ လီး မဟုတျပါဘူးလား “ “ဖာသညျမ” “နငျ က ကွိုကျကုနျး မဟုတျရငျ ဖာသညျးမလား” “ဖာသညျမ ဆိုလညျး ပေးစရာ ပိုကျဆံမရှိဘူး” “ရှိလညျး မပေးနိုငျဘူး အလကားပဲ လိုးမယျ” “ကွားလား ကောငျးမ” “ပွနျဖွလေေ” “ဟုတျ…ဟုတျကဲ့…” “လာစမျး .ဖာသညျမ..ငါဘောငျဘီး လာခြှတျပေး” “ပွီးရငျ နငျ စောကျဖုတျကို လိုးမယျ ငါလီးကွီး တောငျလာအောငျ သသေခြောခြာလေး စုပျ‌ပေးစမျး” ကွိုကျကုနျမက ရိုရိုကြိုးကြိုးနဲ့ ကနြျောဘောငျဘီးကို လာခြှတျပေးနတေယျ။ အရမျးမိုကျတယျဗြာ ခြောခြောငယျငယျ လှလှ ဆျောကို ပွောခငျြသလိုပွောပွီး ခိုငျးခငျြးသလိုခိုငျး နရေတဲ့ဖီလျဘယျလို ပွောပွရမှနျကို မသိဘူး။ကွိုကျကုနျးမက ဘောငျဘီးခြှတျပေးပွီး ကနြျော လီးကွီးကို စိုကျကွညျ့နတေယျ။ကြ‌နျော လီးကွီး ထိပျကဒဈခေါငျးကလဲ အတေျာ့ကိုကွီးပါတယျ။ငါလကျမခှဲ‌ကြျောကြျောသာ ရှညျပေးမယျ လုံးပတျက တုပျပါတယျ။လီးကွီးကို စိုကျကွညျ့နတော သဘောကပြေးမဲ့။ကနြျောလညျး စိတျမရှညျတော့ပါဘူး.—
.”ဟဲ့…ဘာလုပျနတောလဲ လီးမမွငျဖူးတာ ကနြတောပဲ…လီးစုပျပေးပါဆိုနေ လာခဲ့စမျး” “ဟုတျ လာပါပွီ” “ဘယျလိုလဲ ကောငျမ ငါ့လီးကွိုကျလား “ “လာလာ နငျ့စောကျဖုတျကို ကှဲအောငျလိုးပေးမဲ့ ငါ့လီးကွီးကို လာပွီး သခြောစုပျစမျး “ “ပွှတျ-ပွှတျ– ပွှတျ__ ပလှတျ -ပွှတျ” “အားးး ရှီး ကောငျးလိုကျတာကှာ ကောငျးမ လြှာပါ သုံးစမျးပါဟ “ ကွိုကျကုနျးမ က ကနြျော လီးကို လြှာနဲ့ ယကျလိုကျ စုကျလိုကျ အာရပါရ ပယျပယျနယျနယျ စုပျပေးနတေယျ။ကောငျးလိုကျတာဗြာ။ကနြျောလညျး ငုပျတုပျလေ ကနြျောရှမှေ့ာ ထိုငျနတေဲ့ ကွိုကျကုနျးမ စောကျဖုတျကို ခွမေနဲ့ ပှတျပေးလိုကျတယျ။အရညျတှရှေဲနတောပဲ။ “ရှီး…ကောငျးလိုကျတာဟာ…ငါနငျ့ကို လိုးခငျြလာပွီ.. .လီးစုပျတာတျောလိုကျတော့..ဖာသညျမ..” ကနြျော ပွောနတောကိုတောငျ ကွိုကျကုနျးမက လီးကို အရသာတှပွေီ့ လုံးဝကို မလှတျပဲ… ဆကျစုပျနပေါ‌သေးတယျ… “ဟာ..ဒီကောငျမ လိုးပါမယျဆို…”
“တခြီလိုးပွီးရငျ ထပျစုပျရမယျ” နငျ့ပါးစပျထဲက မခြှတျတနျးစုပျရမယျ..” “ဟာ ပွောမရအုံး ဟာ” ဆံပငျကိုဆှဲပွီး မလှတျတမျးစုပျနတေယျ့ ကွိုကျကုနျးမကို ပါးကိုနှဈခကျြ ဆငျ့ရိုကျပွဈလိုကျတယျ။ “ဖွနျး–ဖွနျး” ဒါတောငျ ကွိုကျကုနျမက ကနြျောလီးငုံးထားရငျ ခန ရပျသှားတယျ။လီးကိုတော့ မလှတျပေးသေးဘူး။မထူးတော့ပါဘူး ဒီလောကျဖွဈလှတာ– “ဒီလောကျစုပျခငျြတယျ ဟာမ.ရော့ကှာ…အဲ့မယျ အငျ့..အငျ့..စုပျ…စုပျစမျး” ပွောပွောဆိုဆို ဆံပငျကိုကိုငျပွီး ပါးစပျထဲကို အဖုတျကို လိုးသလို ပငျ့ပငျ့ပွီးလိုး‌ပေးလိုကျတယျ… “အု…အှတျ…ဂှပျ…ဂှပျ…” ကွိုကျကုနျးမ အနနေဲ့အတျောကို ခံရခကျသှားမယျထငျတယျ မကျြရညျတှလေဲထှကျ လာသလို..အာခေါငျထဲထိ လီးကွီးတဆုံးထိုးလိုကျတော့ ခံစားရခကျတဲ့ဝဒေနာကွောငျ့…ဝူဝူဝါးဝါးနဲ အတျောကိုနာကငျြသှားပွီး…ရုနျးဖယျဖို့ လုပျလားတယျ…
“ဘာအခုမှ ရုနျးတာလဲ…” “နငျပဲစုပျခငျြတယျဆို..” .”စုပျလေ…ရော့ရော့.နငျ့ပါးစပျကိုအပီလိုးပဈမယျဟာ.ရော့..ရော့” ကွိုကျကုနျးမ အတငျးရုနျးပွီး ဘယျလိုမှ မခံနိုငျတာတှတေ့ော့မှ… “လာခဲ့…နငျ့စောကျဖုတျကို အသလေိုးပဈမယျ…” “…အဟငျ့အဟငျ့…” ငိုသလိုလို ရယျသလိုလိုနဲ့ အသံက ကနြျောကို ဖီလျ တကျလာစတေယျ။ ကွိုကျကုနျးမဆံပငျကနဆှေဲကိုငျပွီး…တရှတျတိုကျဆှဲချေါပွီး အိပျယာ‌ပျေါတှနျးတငျလိုကျတယျ။အဝတျအစာတှေ ခြှတျပေးတော့ မူသလိုလို လာလုပျ‌နေ‌သေးတယျ။ “ငါလုပျသမြှ ငါခိုငျးသမြှ အေးအေးဆေးဆေးနစေမျး ငါကွမျးမိရငျ အကုနျဆှဲဖွဲလိုကျလို့ ပွနျစရာမရှိဘူးဖွဈသှားမယျ “ အတှငျးခံ ဘရာနဲ့ ပငျတီသာ ကွိုကျကုနျးမ ကိုယျလုံးမှာ ကနျြတော့တယျ..ကနြျောလညျး ခြှတျရတာပငျြးလားတာနဲ့ “အခု…နငျ့မှာ ဒါပဲကနျြတော့တယျ…နငျ့ဘာသာ ခြှတျမလား..ငါဆကျခြှတျပေးရမှာလား..”
“ကြှနျမ ဘာသာခြှတျပါ့မယျ “ “အေး..အာ့ဆိုလဲ သဘော..ဖွေးဖွေးခငျြးခြှတျ ဟိုဘကျလှညျ့ပွီးခြှတျ..ဒါမှ နငျ့ဖငျတုံးကွီးတှကေို ကွညျ့ရမှာ” “ဟုတျ..ဟုတျကဲ့ပါ” ကနြျောကို ကြောပေးပွီး…ပငျတီကို ဖွေးဖွေးခငျြးဆှဲခြှတျ‌နတေယျ..ကွိုကျကုနျးမ ဖငျက အိခြောပိုလောကျကို ကိတျပါတယျ… ဖငျအပွောငျသားနဲ့ တငျပါးကွီးနှဈဖကျ ဝငျးဝငျးအိအိ ထှကျလာတာကို မွငျပွီး ကနြျော မနနေိုငျဖွဈလာတယျ “တောကျ! ဖငျတုနျးကွီးတှကေ အယျနတောပဲကှာ..နောကျကနေ ကုနျးခိုငျပွီး စောငျ့လိုးလိုကျရရငျတော့ ဟငျးဟငျး” ပွောရငျး ဖငျကွီးကို အသာဆှဲဆိတျလိုကျရာ ဖငျတုနျးကွီး တှနျ့ကနဲဖွဈသှားတယျ။ “လေးဘကျထောကျ ဖငျကို ထောငျနအေောငျ ကုနျးထားစမျး” ဒီလိုမြိုးလား “ “အေးဟုတျတယျ” ကနြကေ မလိုးသေးပဲ လီးနဲ့း အဖုတျကို ပှတျနတေော့ “
“အားး ရှီး ရှငျကမြကို သတျနတောလား လိုးပေးပါတော့ရှငျ ဘယျလိုမှမခံစားနိုငျတော့ဘူး တောငျးပနျပါတယျ အဟငျ့ဟငျ့” “ဟား စောကျကောငျမ ရှလိုကျတာဟာ အေး ပီးမှ တျောပါတော့မလုပျနဲ့ နငျလိုခငျြတဲ့ ငါ့လီး ရော့ဟာ” ပွောပွောဆိုဆို အရမျထနျးနတေဲ့ ကွိုကျကုနျမ အဖုတျထညျး လီးကွီးကို မညှာမတာ တဈခကျြထညျး ဆောငျ့ထိုးထညျ့လိုကျတယျ။ ” ဗွဈဗွဈ ဗွှတျဗွှတျ” ဗွဈဗွဈ ဆိုပွီး ကပျြကပျြတညျးတညျး ဝငျသှားတာ။လီးဝငျတာနဲ့ တုနျခါပွီး ကော့တပျပွီး ကွိုကျကုနျးမ ပွီးသှားတယျ။တျောတျောထနျနတောပါလား။လီးထိပျ လဒဈတောငျနာသှားတယျ။ကပျြစီးနတောပါလား။ဒါတောငျ အရညျက အိုငျထှကျနတော။သူတဆကျဆကျတုနျပွီး ပွီးနလေို့ လီးကွီးတဆုံး ထိုးထညျ့ပွီး ခနစိမျပေး ထားလိုကျရငျ အဲ့လောကျကပျြနတေော့ မသကျာလို့ မေးလိုကျတယျ “ဖာသညျမ နငျဘယျ‌ခါ ခံဖူးတာလညျး ကပျြစီးနတောပါလား” “ဒါနဲ့မှ သုံးခါ နဖေူးတာပါ” “လီးနဖေူး လိုးခံဖူးတာလို့ပွော” “ဟုတျ ကမြရညျးစားနဲ့ နှဈကွိမျး လိုးခံဖူးပွီး ရှငျနဲ့ တဈကွိမျး လိုးခံဖူတာပါ” “ဪ ခုမှ ကွိုကျကုနျး စဖွဈတာလား ကောငျးတယျ ငါက ကွိုကျကုနျးမှာ ဈေးဦးပေါကျစဖှငျ့တာပေါ့ ဟုတျလား ဖာသညျမလေး” “ဟုတျကဲ့ ရှငျ့” ကွိုကျကုနျးမ တဆကျဆကျတုနျရငျ ပွီးတာငွိမျးသှားပွီး ဆိုတော့မှ နို့တှေ ဆှဲပွီး တဖနျးဖနျး အသကုနျး တကျခှ ဆောငျ့လိုး ပေးလိုကျတယျ။
“အငျ့ဟာ ဖာသညျမ ဗွဈဗွဈ ဘှတျ ဘှတျ “ “အသံ ထှကျပွီး ခံလေ ကောငျးမ ငွိမျမနနေဲ့” “အား ရှငျ့လီးက ကမြ အဖုတျထဲမှာ အပွညျ့ပဲ” “အား” ” အရမျး ဆောငျ့တာပဲ “ “ရှီး “ “ကောငျးလိုကျတာ “ “ဆောငျ့ပါ” ” အား” ‌”ကောငျးတယျ ခုလို အသံထှကျပွီး ခံရတာ ကောငျးလိုကျတာ အရငျ ကိုကို နဲ့ ငွိမျငွိမျ လေး လိုးခံရတာနဲ့ ဘာမှ မဆိုငျဘူး” “နောကျ အသံထှကျပွီး ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးပဲ ခံတော့မယျ” “ဗွဈဗွဈ ဒုတျ ဒုတျ ဘှတျ ဘှတျ ဗွှတျဗွှတျ” “အား ဟငျ့ဟငျ့ အအ “ “အားး ကောငျမ စီနတောပဲ နငျ့အဖုတျက “ အရညျတှေ အရမျးရှဲနတောနဲ့ စောကျရညျတှနေဲ့ ပပှေနတေယျလီး ကို အဖုတျက ခနခြှတျပွီး ထပျစုပျခိုငျလိုကျတယျ။ “ကောငျမ လားစမျး နငျ့ စောကျဖုတျကို လိုးထားတဲ့ လီးကို စုပျစမျး “ အဖုတျထဲက အရညျတှနေဲ့ ပပှေနတေဲ့ လီးကို မရှံ မရှာ သူပါးစပျနဲ့ ငုံလိုကျစုပျလိုကျ လုပျပေးရှာတယျ။ “ပွှတျ ပွှတျ ပလပျပလပျ ပွှတျ ပွှတျ ပလပျပလပျ” “အား ကောငျးတယျကှာ နဦေး ငါထပျလိုးဦးမယျ ဒီတခါ ပကျလကျလှနျလိုကျ “ “ဟုတျ” “အငျ့ဟာ ဖာသညျမ ဘှတျ ဘှတျ “ “အား အဟငျ့ ဟငျ့ အ အ “
ဖာသညျမကို ညှာမနတေော့ဘူး နို့တှကေိုပါ ခပျကွမျးကွမျး ဆုပျကိုငျ ရငျး နို့တှေ စို့ရငျး အဆုံးထိ ဆောငျ့ဆောငျ့ပွီး အသကုနျလိုးပေးလိုကျတယျ။အဖုတျအတှငျးသားတှေ ပှစိပှစိနဲ့ လီးကွီး ကို ပွနျညဈပေးတယျ။ကောငျးလိုကျတာဗြာ။ “ဗွဈဗွဈ ဒုတျ ဒုတျ ဘှတျ ဘှတျ ဗွှတျဗွှတျ” ” ဗွဈဗွဈဘှတျဘှတျ ပွှတျပွှတျ ဘှတျ ဗွဈဗွဈ” “ကောငျးလိုကျတာ နငျ့နို့တှေ ကွီးလိုကျတာ လုံးပွီး တငျနတောပဲ ကိုငျလို့စို့လို့ ကောငျးတယျ အား ဟုတျတယျ အဲလို နငျ့စောကျဖုတျနဲ့ ငါ့လီးကို ညှဈပေး ကောငျးတယျကှာ ဖာသညျမ “ “ဟငျ့ အအ ကမြ ပွီးတော့မယျ အား ကောငျးလိုကျတာ လိုးလိုး” “အား အငျ့ “ ” ပွှတျပွှတျပွှတျ ပွှတျ “ “ဗွဈဗွဈ ဒုတျ ဒုတျ ဘှတျ ဘှတျ ဗွှတျဗွှတျ” “ပွှတျ ပွှတျ ငါလဲပီးခငျြပီ” လီးကို အဖုတျထဲက ခြှတျလိုကျပွီး သူပေါငျကို ဖွဲပီး ကနြျောလကျနဲ့ အစိကို ခွလေိုကျ ပှတျလိုကျ လုပျပေးလိုကျတယျ။ ကွိုကျကုနျးမလညျး ကော့ပြံနအေောငျ ကောငျးနတေယျ။အဖုတျထဲကို လကျသုံးခြောငျး ထိထညျပွီး ခပျကွမျးကွမျး လကျနဲ့ လိုးပေးပွဈလိုကျတယျ ။ ကော့ပြံလနျပီး အရညျတှေ ပနျးပနျးထှကျပီး ပီးသှားတာ ဖုတျလိုကျဖုတျလိုကျနဲ့ နတောပဲ။အမောဖွေ နတော ခန စောငျ့လိုကျပွီး။ “ဖာသညျးမ အမောဖွေ မနနေဲ့ ငါ့ လီးလာစုပျအုံး”
“ဟုတျ” ဆို ကုနျးထလာပွီး လီးကို လာကုနျးစုပျတယျ။အပေး ကတော့ ကနြျောတောငျစှဲမကျ သှားတယျ။ “ပွှတျပွှတျပွှတျ ပလပျပွှတျ” “ကောငျးလိုကျတာ အဆုံးထိစုပျစမျးပါ ခှေးမ ငါအားမရတော့ဘူး” ပွောပွီး ခေါငျးကို ဖမျးခြုပျပီး သူ ပါးစပျထဲကို အဖုတျကို လိုးသလို မညှာမတာ‌ဆောငျ့လိုးလိုကျတယျ။လီးကို အာခေါငျထိရောကျ‌အောငျ။ ခေါငျးကို ပေါငျရငျထိ ကပျအောငျ အတငျးဆောငျ့ထိုးပွဈလိုကျတယျ။ကွိုကျကုနျမ မခံနိုငျလို့ အတငျးရုနျးပမေဲ့ ကနြျောခြုပျထားတဲ့ အားကိုမလှနျဆနျနိုငျပါဘူး။ အခကျြ ၂၀ လောကျ ပါးစပျကို ခပျကွမျးကွမျးလိုး‌ပေးပွီး လရညျထှကျတော့မှာမို့ အာခေါငျထိစိုကျခရြငျး လရညျတှပေနျးထညျ့လိုကျတယျ ။ “ဖာသညျမ အကုနျမွိုစမျး တစကျ မှ မဖိတျစနေဲ့” “အှတျ အဟှတျ ဂလု အှတျ ဂလုဂလု” ကနြျောလညျး အားရသှားမှ သူပါးစပျထဲက လီးကို ခြှတျပေးလိုကျတယျ။ကွိုကျကုနျမကတော့ လရညျတှေ အကုနျသောကျလိုကျရလို့ အရမျးမောနတေယျ။ “လီး သနျ့ရှငျးရေး လုပျပေးအုံး နငျ့ပါစပျနဲ့ ‌” “နငျ့စောကျရညျတှေ လရတှေပွေောငျးအောငျ ယကျအုံး” “ပွှတျပွှတျပွှတျ ပလပျပွှတျ” အငျး ရပွီး နငျ အငျကြီနဲ့ သုတျပေးအုံး ဟုတျ “ကဲ မငျးပွနျခငျြပွနျလို့ရပီ ဖုံနံပါတျပေးခဲ့အုံး ငါဖုံးနံပတျလညျး ယူသှား”
“နောကျ ငါလိုးခငျြတယျ အခြိနျ ချေါလိုးမယျ ကွားလာ” “ဟုတျကဲ လာပါမယျရှငျ” “အျောဒါနဲ့ မငျးကို လိုးသှားတဲ့ငါ နာမညျ ဘယျလို မှတျမလညျး ကိုယျ့ကိုလိုးတာဘယျသူမှနျးလညျး မငျးမသိဘူးမလား” “ထားပါ မငျးအဆငျပွသေလို မှတျလိုကျ” “မငျးကိုတော့ ကွိုကျကုနျးမ လို့မှတျထားမယျ” “ဒါလောကျနံနံစျောစျော Bus စီပွနျလို့တော့ ရမှာမဟုတျဘူးနျော” ကဲ ငါပွနျပွီး တာ့တာ့ ကွိုကျကုနျးမလေး။ crd;
ဦးကိုကိုကြီး တစ်ယောက် ရုံပိတ်ရက် Super Sunday မတွေ့တာ ကြာတဲ့ သူငယ်ချင်းနဲ့ ချိန်ထားတာနဲ့ မြီု့ထည်းဘက် ထွက်လားခဲ့တယ်။ရုံးသွား ရုံးပြန် ဖယ်ရီး စီနေကျမလို့လား မသိဘူး YBS စီရတာ တော်တော် တိုင်ပတ်။ ကားကလဲ ကျပ်လိုက်တာ YBS Bus ထုံးစံ အတိုင်းပေါ့။ စပယ်ယာက နောက်လူတွေ အဆင်ပြေအောင် အနောက်ထဲ တိုးကျပါဆိုတာနဲ့ နောက်ထိရောက်အောင် တိုးလိုက်တယ်။ ဒါ‌ပေမဲ့ အလယ် ကောင် မှာပဲ ညပ်နေတယ်။ အဲ့အချိန်မှာ ဘေးမှာ မြင်လိုက် ရတာက ကောင်းမလေး တစ်ယောက်နဲ့ ကုလားကြီး တစ်ယောက် သာယာနေတာ သွားတွေ့တယ်။ အဲ့ ကုလားက ပေစုပ်စုပ်မှ တကယ့် ပေစုပ်စုပ် ညစ်နွမ်းနွမ်း ရုပ်ကလည် စုတ်ပျက်သတ် အဲ့လို့ နွားနို့ပိုတဲ့ ကုလားကြီးဗျာ။‌ ပြီးကောင်းမလေးက တော်ချောချောလေ လူပုံလေးကလည်း နူဖတ်နေတာပဲ အသက်နှစ်ဆယ် အရွယ်လောက် ၃၄”၂၄”၃၆” ဆိုဒ် ဘော်ဒီအ‌တော် လှတဲ့သူ ဝတ်ထားတာက စကပ်အတိုလေး ဘလောက်စ်လေနဲ့ အတော်ကို လိုက်ဖက်တယ်။အဲ့လို ကောင်းမလေးနဲ့ ကုလားကြီးနဲ့ မြင်ရတာ အဆင်မပြေ လိုက်တာဗျာ။ပြီး ဒီလို ကုလားကြီးကိုမှ မြန်မာအမျိုးသမီး ဖြစ်ပြီး သာယာနေရလားဗျာ။
ကုလားကြီးက ကောင်းမလေးကို အနောက်ကနေ သူလီးကြီးနဲ့ ထောက်ထားရင်း ကုလားကြီး လက်က စကပ် အကွဲထဲ ဝင်နေတယ် တွေ့ရတယ်။ ကောင်းမလေး အဖုတ်ကို နှိုက်‌နေတာထင်တယ် ။ နောက် လက်တဖက် ကလဲ ကောင်းမလေး တင်ပါးတွေကိုနယ်နေတယ်ကောင်မလေး ကမျက်လုံး‌လေး စင်ပြီး ဖင်လေကို ကော့ပေးနေတယ်။ဘေးမှာ ကျနော် အပြင် မသိမသာ ကြည့်နေတယ် သူတွေလည်း ရှိတယ်ဗျာ။အဲ့တာကို နှစ်ယောက်သာ ဘယ်သူမှ ဂရုမစိုက်တဲ့ အထာနဲ့ ဖြစ်ချင်တိုင် ဖြစ်နေကျတယ်။ ကျနော် ဦးကိုကိုကြီး လည်း မြန်မာမ ချောချောလေး ကုလားနဲ့ သာယာနေတာ တော်တော် တင်သွား မြင်ပျင်းကပ်သွားတယ်။ တော်တော် ထန်တဲ့ အထန်မပါလား။ရုပ်လေ လှသလောက် လူကအဆင့်ရှိတယ် ထင်ရတဲ့ရုပ်နဲ့ ကြိုက်ကုန်မ ဖြစ်နေပါလား။ကုန်းလည်း ဗမာ ဗမာချင်းကုန်ပါလားဗျာ ကုန်းစရာရှားလို့ ကုလားကို ကုန်းရသလား။ ဗမာလီး လည်း ကြီးပါတယ် ကြိုက်ကုန်မရယ်လို့ စိတ်ထည်းက တွေမိနေတယ်။အမြင်မကြည်တာနဲ့ ကျနော်ဦးကိုကိုကြီးလည်း ကုလားကို ပေစောင်းစောင်း ကြည့်ပြီး ဇွတ်တိုးလိုက်တယ်။ကုလားလည်း ကျနော် ကြည့်တော့ မသိမသာနဲ့ ကောင်း‌မလေး ဘေးကနေ နည်းနည်း ရွေ့သွားတယ်။အဲ့မှာ ကုလားကြီး က သူလီးကြီးနဲ့ ဖင်ကြား ထောက်နေရာကနေ ဘေးကို ရွေ့သွား‌ရော့ ကုလားကြီး ခွားသွားတာကို ကောင်းမလေးက သူဖင်ကြီး ကို ကုလားကြီး ဘက်လိုက်တိုးပြီး အတင်းကြီး လိုက်ကပ်နေ‌‌သေးတယ်။ကျနော် ဦးကိုကိုကြီး လည်းပိုတင်သွား‌ပြီးတော့ ကောင်းမလေး နောက်ကို ဇွတ်နေရာ ဝင်ယူလိုက်တယ်။ပြီးဘေးက ကုလားကြီးကို နည်းနည်း မိုက်ကြည့် ကြည့်လိုက်တော့ ကုလား‌က အဲ့နေရာကနေ busကား နောက်ပိုင်းကို တိုးဝင်သွားတယ်။
ကျနော် ဦးကိုကိုကြီး လည်းစိတ်တိုတိုနဲ့ ရွလိုက်တဲ့ ကြိုက်ကုန်းမ ရွအုံးဟ ဆိုပြီး အဲ့ကောင်းမလေး ဖင်ကြီးကို လက်နဲ့ စုံကိုင်ပြီး‌တော့ကို သူဖင်ကားကားကြီးကြား ကျနော် လိမ်တန်ကြီး အတင်းကို ဆောင့်ထိုးထည်း ထောက်လိုက်တယ်။ ကောင်းမလေးက နောက်ကို လှည့်ကြည့်လားတော့ ကျနော်လည်း စိပ်‌တိုစိတ်ပေါက်တာနဲ့ သူနားနား ကိုကပ်ပြီး လေသံနဲ့ ပြောလိုက်တယ်။ “စောက်ကောင်းမ နင်ဖင်တော်တော် ယားနေလား အရမ်းယွထ နေလား” “ဟိုမှာ လူတွေ အမျာကြီး နင်နဲ့ ကုလာကြီး ဖြစ်ချင်သလိုဖြစ်နေတာ ကြည့်နေတာ ရှက်ရမှန်မသိဘူး” “လီး အရမ်းဆာနေလား စောက်ရှက်မရှိဘူးလား စောက်ကောင်းမ” “ဟိုက ဖယ်သွားတာတောင် နင်က ဖင်ကြီး လိုက်ပြစ်ကုန်းပေးနေ‌သေးတယ် စောက်ရှက် နည်းနည်းမှ မရှိဘူး” “ကုန်းစရာ အဲ့လောက်ရှားလား စုတ်ပျတ်သပ်နေတဲ့ ကုလားကြီး မှ ကုန်းရသလား” “ဗမာလည်းလီးပါတယ် ဖာသည်မ အဲ့လောက် လီးဆာနေရင် နင့် စောက်ပက်ပြဲကွဲ ထွက်သွားအောင် ငါ့ဗမာလီးကြီးနဲ့ လိုးပေးမယ်” “လီးနဲ့ ထောက်ခံချင်‌နေတာ မဟုတ်လား နင့်ဖင်ကြီးကော့ပြီး ကုန်း‌ပေးထားစမ်း ငါ့လီးကြီးနဲ့ နင်ဖင်ကြား ထောက်ပေးမယ် “ “အဖုတ်လည်း တော်တော် ယားနေတယ်မလား အရည်တော်တော် ထွက်နေလား မှန်စမ်း ကုလားကြီး ကိုင်သွားတဲ့ နင့်စောက်ဖုတ် စမ်းကြည့်ရအောင်”
ကျနော်လည်း ပြောပြောဆိုဆို ကောင်းမလေး စကပ် အကွဲထည်း ကျနော်လက်ကြီး လျိုသွင်းပြီး အဖုတ်ကို အုပ်ကိုင်လိုက်တယ်။ဟာ! ဒါလောက် ပြောဆို‌ခံနေရတာတောင် အရည်ထွက်‌ နိုင်သေးတယ်။တကယ် မနိုင်တဲ့ အထန်မ ပါလား။ ကောင်းမလေးကို ကြည့်လိုက်တော့ မျက်နှာက ရှက်ပြီး ရဲတွပ် နီမြန်တော့ နေသာ ရှက်တော့ ရှက်တယ် ယွလည်းယွတယ် ခံလည်း ခံချင်တယ် ထင်တယ်။ခုန ကုလားကြီးနဲ့ ဖြစ်နေတော့ မရှက်ဘူးလား မသိဘူး။ကုလားကြီးနဲ့ အကြောင်းတွေးမိတော့ ပြန်‌တင်းသွားပြီး ထပ်နင့်နင့်သီးသီး ပြောမိပြန်တယ်။ “စောက်ကောင်းမ ခုမှရှက်သလိုပုံနဲ့ ကုလားကြီးကို ဖင်ကုန်ပေးပြီး လူတွေ ဝိုင်းကြည့် ခံ‌နေရတုန်ကျ ရှက်ရမှန် မသိဘူးလား” “နင်တော်တော် ယွတယ်နော် ဒီလောက်ပြောခံရတာတောင် စောက်ဖုတ်ကြီး ကအရေတောက်တောက် ကျနေနိုင်သေးတယ်” ” စောက်ဖုတ်ကြီးကလည်း အကြီးကြီးပဲ စောက်ရည်တွေလဲ ရွှဲနစ်နေတာပဲ” ” နင် တော်တော် ခံချင်နေပြီးလား” ကြိုက်ကုန်မက “မပြောပါနဲ့”…..
လို့ —လေသံတိုးတိုးနဲ့ ပြန်ပြောလာတယ်။ ကျနော်လည်း စောက်မြင်ကပ်ကပ်နဲ့ “ဘာ မပြောပါနဲ့‌လည်း လီး မပြောပါနဲ့လား” “လူတကား အထောက်ခံတဲ့ ကောင်းမ ကများ” “နင့် ဖင် ထောက်ထားတဲ့ ငါ့လီးကြီး ကို ကြိုက်လား” “ငါ့ လီးကြီးနဲ့ နင့်ယားနေတဲ့ အဖုတ်ကြီး ပြဲအောင် လိုးပေးရမလား” “နင့်နောက် ကုလားကို ဖင်မကုန်း တော့အောင်ဗမာလီး ကြိုက်သွားအောင် ဗမာလီးမှ ဗမာလီး ဖြစ်အောင် လိုးပေးမယ် ဖာသည်မ”– လို့ပြောလိုက်တော့ “တောင်းပန်းပါတယ်” လို့ ပြန်ပြောလာတယ်။
“တောင်းပန်းမနေနဲ့ ဖာသည်မ နင်မနေနိုင် မထိုင်နိုင် ယားနေတဲ အဖုတ်ကို အယားပြေအောင် လုပ်ပေးရသေးတာပေါ့” ပြောပြော ဆိုဆို ကျနော်လက်ကို စောက်ရည်တွေ ချွဲနေတဲ့ အဖုတ်ကို အုပ်ကိုင်းထားရာကနေ ရွှဲစိုနေသော အဖုတ်အကွဲကြောင်း တလျှောက် ထိသည်ဆိုရုံလေး ပွတ်သပ် ပေးလိုက်တယ်။ ကောင်းမလေး ဒူးတွေပါမခိုင်ချင်သလို ဖြစ်သွားပုံရတယ်။ ပြီးအဖုတ်ထည်းကို လက်နှစ်ချောင်ပူ ထိုးထည့်ပြီး အတင်း တဇွတ်ဇွတ် စောင့်ထိုး ပေးလိုက်တယ်။ကြိုက်ကုန်မ တော်တော်ယွတယ် အရည်းတွေ တစိမ့်စိမ့်နဲ့ကို စိမ့်ကျလားတယ်။ “ခံလို့ကောင်းလား စောက်ပက်ပြဲမ” “နင့်စောက်ပတ်ကြီးကို ငါလက်နဲ့ လိုးပေးတာ ကောင်းလား ခံလို့ ကြိုက်လား” “နင် အလိုးခံရတာ ကြိုက်ရင် ကားပေါ်က ဆင်းမှ ငါလီးကြီးနဲ့ နင့်စောက်ပက်ကြီး မယားနိုင်အောင် စောက်ပက်ထည်း ဖွာထွက်အောင်ကို လိုးပေးမယ်”— လို့ပြောနေတုန်း ကြည့်လိုက်တော့ ဆင်းရမယ်မှတ်တိုင်းရောက်ခါနီးနေတာနဲ့ အပေါက်ဝကို တိုထွက်လာလိုက်ပြီး ကပျာကယာ ပြေးဆင်းလိုက်တယ်။‌ကြိုက်ကုန်မက လိုက်ဆင်းလာတယ်။ဟာ ဒီစောက်ဖာသည်မက တော်တော် မနိုင်တဲ့ ဟာမ ပါလား ဟ။‌စောင့်မြင်ကပ်လို့ လိုးပေးမယ် ပြောတာကို လိုက်လားတယ်။ တော်တော် အံဩမှင်သပ် သွားတယ်။
ကောင်းမလေးက တော်တော်လှလှ ရုပ်သန့်သန့်လေးပါ ကြိုက်ကုန်း ဖြစ်နေတာက လွဲရင်ပေါ့။ လိုးတော့ကောင်းမှာပါလေ နည်းနည်းသန့်‌လောက်မှာပါ။ကျနော်က ဖာသည်တွေ ကြိုက်ကုန်တွေ ချတာ မဟုတ်ဘူး။ ခုက ပြောထားပြီးသာလည်းဖြစ် ကြိုက်ကုန်မ ကလည်း တော်တော် ချောလို့ သန့်လို့သာ ဇွတ်လည်း လိုက်လားတာဆိုတော့ လိုးတော့ပေးရမှာပေါ့။နည်းနည်းတော့ ညင်းဆဲလိုက်အုံးမယ် အတွေးနဲ့— “စောက်ကောင်းမ တော်တော် ခံချင်နေပြီးလား ငါလိုးပေးတာကို ခံချင်လို့လား ငါ့လီးကြီးကို ကြိုက်လို့လား” “ငါလိုးတာ ခံချင်ရင် ဒီနေရာမှာ‌စောင့် နောက်နှစ်နာရီလောက် ကြာရင် ပြန်လာခဲ့မယ် ကြားလား” ကျနော်လည်း သူငယ်ချင်းနဲ့ ချိန်ထားတာ ရှိသေးတယ် လူကမအားဘူးလေ။ပြောလည်း ပြီရော့ ကျနော်လည်း လှည့်ထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်။
ကျမ နာမည်က မိုးသဲဖြူပါ။ကျမ မှာချစ်သူ ရှိပါတယ်။ကျမရဲ့ ကိုကိုပေါ့။ဒီနေ့က တော့ ကျမရဲ ကံဆိုမူလား ကံကောင်းမူလား ဘာလား မသိတဲ့ နေ့‌တနေ့ပေါ့။ဒေါ်လေးက သူတိုက်ခန်း အရောင်းအဝယ် အတွက် စာချုပ်တွေ အမြန်လာပို့ပါဆိုတော့ ကိုကို က သူလိုက်ပို့မယ် ဆိုပြီး လိုက်ပို့တယ်။ လမ်းတဝက်လည်း ရောက်ရော့ ကိုကိုဆီ ဖုံးဝင်လာတယ် အလုပ်ကိစ္စ အရေကြီး‌နေလို့ လှမ်းခေါ်တာ ကိုကိုလည်း မိုးကို လှည့်‌ကြည့်နေတော့ ကိုကို ကို့ သနားတာနဲ့ “ကိုကို သွားလေး မိုး ဒီနားကနေ ကားငှားပြီး ဆက်သွားလိုက်မယ်” “မိုး ရလို့လား” လို့မေးတော့ “အမယ်လေး ကိုကို ရယ် ရန်ကုန်သူပါ” “ဒါဆို ကိုကို သွားမယ် အရေကြီးနေလို့နော် ဂရုစိုက်သွား ကားငှားသွားနော်” ပြောပြီး ကိုကို စိတ်မချတချနဲ့ ထွက်သွားတယ် မိုးလည်း taxi ငှားဖို့စောင့်နေရင် ကိုကို ချထားတဲ့ နေရာက 🚖ကားတော်တော်နဲ့ မလားတဲ့‌ နေရာ ဖြစ်နေတယ် စာချုပ်ကလည်းအရေးကြီး သွားပေးရမှာ ဆိုတော့ မထူးပါဘူး ဆိုပြီး နီးတဲ့ မှတ်တိုင် သွားလိုက်တယ်။မှတ်တိုင်‌ ရောက်တာနဲ့ YBS Bus တစ်စီး ဆိုက်လာပြီး ကိုယ်သွားမယ့်နေရာ လမ်းကြောင်းတည့်တာနဲ့ bus ပဲ တက်စီးလိုက်တယ်။အရင်က bus ကားက စီးနေကျမဟုတ် ခုက အရေးကြီးနေလိုသာ စီးရတာ။
ကားပေါ်မှာ လူတွေက အပြည့်ပဲလေ ။ စပါယ်ယာအော်သံကြောင့် မိုးလဲ အတွင်းထဲတိုးသွားပီး လက်ကိုင်ကွင်းကို လက်တစ်ဖက်နဲ့ ကိုင်ရင်း ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိန်း‌နေရတယ်။ ကားသမားကလဲ မောင်းချက်ဆိုတာ မိုးမှာ မနည်းထိန်းနေရတာ။ နောက်လက်တစ်ဖက်က စာချုပ်ဖိုင်တွေကို ပိုက်ထားရတယ်လေ ။ အဲအချိန်မှာပဲ မိုးရဲ့ တင်ပါးပေါ်မှာ အထိအတွေ့တစ်ခုခံစားလိုက်ရတယ် ။ မိုးရှက်လဲရှက် ကြောက်လဲကြောက်ပေမဲ့ မတော်တဆ လာထိတာနေမှာပါလို့ တွေးလိုက် မိတာ အမှန်ပါ။ အနောက်ကလက်က သွေးတိုးစမ်းတဲ့အနေနဲ့ မိုးတင်ပါးကို လက်ဖမိုးနဲ့ ထိလိုက် လက်ဖဝါးနဲ့ ဆွဲပွတ်လိုက် လုပ်နေတာ မိုးစိတ်ထဲ တဖြည်းဖြည်း ကြောက်စိတ်တွေ ဝင်လာတယ်။ အဲတာနဲ့ အနောက်လှည့်ကြည့်တော့။ ပေစုပ်စုပ် ညစ်နွမ်းနွမ်း ရုပ်ကလည် စုတ်စုတ်ပျတ်ပျတ် နွားနို့ပိုတဲ့ ကုလားကြီး။ မိုးစိတ်ထဲ ကတုန်တရင်တွေဖြစ်လားတယ် ပေစုပ်စုပ် ကုလားကြီးက လုပ်ခံနေရတာ။‌ကြောက်ကြောက်နဲ့ ငြိမ်နေမိတာ။ကုလားကြီးကလဲ မိုးငြိမ်နေမှန်းသိတော့ စကပ်ပေါ်ကနေ သေသေချာချာကို ပွတ်နေတာ။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပိုဆိုးလာပီး မိုး ဖင်တွေကို နယ်ပါလေရော။ မိုး ရှက်ပေမဲ့ ဝန်ခံရရင် မိုး အဖုတ် ထဲကနေ အရည်တွေစိမ့်နေတာ ။ အဲထက်ပိုဆိုးတာက သူ့လက်က တဖြည်းဖြည်းနဲ့ မိုးဖင်ကြားထိ ဝင်လာပြီး လာပွတ်နေတာ ။
မိုးစိတ်တွေ ဘယ်လိုမှ ထိန်ချုပ်လို့ မရတော့ဘူး။ဘာမှမသိတော့ဘူး အဲ့ဒီစိတ်က လွမ်းမိုးသွားပြီး။ အဲ့အချိန် ကုလားကြီးက အဖုတ်နိူက်နေတဲ့လက်ကော ထောက်ထားတဲ့ သူ အတန်ကြီးကော နောက်ဆုတ်သွားတယ်။မိုး စိတ်တွေ ဘယ်လိုဖြစ်သွားမှန် မသိဘူး လုံဝ အကွားမခံပဲ လိုက်ကပ်နေမိတယ်။ အဲ့အချိန် ဘေးက‌နေ ပိုင်စိုပိုင်နက် လက်တစုံက မိုးဖင်ကြီးကို လက်နဲ့ စုံကိုင်ပြီး သူလိမ်တန်ကြီးကို မိုးဖင်ကားကားကြီးကြား အတင်းလာ ဆောင့်ထိုးထည်းတယ်။ လူတကိုယ်လုံး ဖျဉ်းကနဲ့ ဖျဉ်းကနဲ့ ပူထူပြီး တုန်ဆင်းသွားတယ်။အဲ့ဒီ မိုးဖင်ကို လက်နဲ့ကိုင်ပြီး ‌ ထိုးထည်းတဲ့လူ လိင်တန်ကြီးက ကုလားကြီး လိင်တန်ကြီးထက် တုပ်ပြီး ကြီးတယ်။ပြီး အဲ့လူကြီးက မိုးဖင်ကြီးကိုင်ပြီး ထိထိမိမိ ပယ်ပယ်နယ်နယ် ထိုးထည့်နေတာ ကျမ ရမက် မီးတောက်ကို လောင်စားကောင်းကောင်းနဲ့ ရို့လိုက်သလိုပါပဲ။ကျမ မသိမသာ လှည့်ကြည့်မိတယ် ဆိုရင်ပဲ အဲ့လူကြီးက
“ကုလားကုန်မ xxxအပျက်မxxxလူတွေကြားမှာ ခံနေတယ်ဟာမxxxဗမာလီးနဲ့လိုးမယ်xxxဖာသည်မxxxxကုလာကြီး ကိုင်သွားတယ်စောက်ဖုတ် ကိုင်ကြည့်မယ်” ဆိုပြီး ကျမကို ပျစ်ပျစ်နှစ်နှစ် ပြောနေတယ်။ အဲ့ လူကြီးက ပြောပြောဆိုဆို မိုး စကပ် အကွဲထည်း လက်ကြီးသွင်းပြီး အဖုတ်ကို အုပ်ကိုင်လိုက်တယ်။ကျမ အရည်တွေရွဲ နေတာ အဲ့လူကြီး သိသွာပြီး။ ကျမ မျက်နှာက ရှက်ပြီး ရဲတွပ် နီမြန်နေတယ်။နောက်ကလူကြီး စကားတွေက ကျမ ရင်ကို ဓားထက်ထက်နဲ့ မွှန်နေသလို ခံစားရ ခက်ပါတယ်။အဲ့တာထက် ပိုဆိုးတာက အဲ့တာတွေနားထောင်းရင် အဖုတ်ထည်းက အရည်တွေ စိမ့်စိမ့်ထွက်နေတာပါပဲ။အဲ့လူကြီးက ရှက်နေတာ ကိုလည်း နင့်နင့်သီးသီး ပြောပြန်တယ်။ “စောက်ကောင်းမ ခုမှရှက်သလိုပုံနဲ့ ကုလားကြီးကို ဖင်ကုန်ပေးပြီး လူတွေ ဝိုင်းကြည့် ခံ‌နေရတုန်ကျ ရှက်ရမှန် မသိဘူးလား”
“နင်တော်တော် ယွတယ်နော် ဒီလောက်ပြောခံရတာတောင် စောက်ဖုတ်ကြီး ကအရေတောက်တောက် ကျနေနိုင်သေးတယ်” ” စောက်ဖုတ်ကြီးကလည်း အကြီးကြီးပဲ စောက်ရည်တွေလဲ ရွှဲနစ်နေတာပဲ” ” နင် တော်တော် ခံချင်နေပြီးလား” ကုလားကြီးနဲ့လည်း သူအတန်ကြီးနဲ့ အထောက်ခံရပြီးပြီး။စောက်ဖုတ်လည်း ကုလာကြီး အကိုင်ခံရပြီးပြီး။လူတွေလည်း ကျမကိုလုပ်ချင်သလို လုပ်တာကို ဝိုင်ကြည့်ခံနေရတယ်။ နောက်ကလူကြီးက ကျမကို အပျက်မ အယွမ ထင်ပြီးလုပ်ချင်သလိုလုပ် ချင်ရာပြောနေတယ်။ဒါပေမယ့်လည်း မသိစိတ်က အဲ့တာကို သာယာနေမိတယ်။မဖြစ်သင့်မှန် သိပေးမဲ့ပြောလေ စိတ်ကပိုထလေ၊လုပ်ခံရလေ စိတ်ကပိုထလေ ဖြစ်နေတယ်။ကျမ ဘယ်လို မိန်းမ ဖြစ်နေပြီးလည်း ။ “မပြောပါနဲ့” စိတ်တွေ ထိန်းမရလို့ ‌အဲ့လိုပြောမိခါမှ ပိုဆိုးဆိုးဝါးဝါး ပြောခံရပြန်တယ်။ “ဘာ မပြောပါနဲ့‌လည်း လီး မပြောပါနဲ့လား” “လူတကား အထောက်ခံတဲ့ ကောင်းမ ကများ” “နင့် ဖင် ထောက်ထားတဲ့ ငါ့လီးကြီး ကို ကြိုက်လား” “ငါ့ လီးကြီးနဲ့ နင့်ယားနေတဲ့ အဖုတ်ကြီး ပြဲအောင် လိုးပေးရမလား” “နင့်နောက် ကုလားကို ဖင်မကုန်း တော့အောင်ဗမာလီး ကြိုက်သွားအောင် ဗမာလီးမှ ဗမာလီး ဖြစ်အောင် လိုးပေးမယ် ဖာသည်မ”–
လို့ပြောလာတော့ “တောင်းပန်းပါတယ်” လို့ပြောမိတယ် ဟုတ်တယ် ကျမစိတ်တွေ မထိန်းနိုင်တော့ပါဘူး‌လေ။
“တောင်းပန်းမနေနဲ့ ဖာသည်မ နင်မနေနိုင် မထိုင်နိုင် ယားနေတဲ အဖုတ်ကို အယားပြေအောင် လုပ်ပေးရသေးတာပေါ့” ပြောလည်း‌ပြော အဲဒီးလူကြီး လက်ကြီးက စောက်ရည်တွေ ချွဲနေတဲ့ အဖုတ်ကို အုပ်ကိုင်းထားရာကနေ ရွှဲစိုနေသော အဖုတ်အကွဲကြောင်း တလျှောက် ထိသည်ဆိုရုံလေး ပွတ်သပ် ပေး‌နေတယ်။ ကျမ ဒူးတွေပါမခိုင်ချင်သလို ဖြစ်သွားတယ်။ ပြီးအဖုတ်ထည်းကို လက်နှစ်ချောင်ပူ ထိုးထည့်ပြီး တဇွတ်ဇွတ် စောင့်ပေးလားတယ်။အရည်းတွေ စိမ့်စိမ့်ကျပြီး ဘယ်နှစ်ကြိမ်လောက် ပြီးလို့ပြီးမှန်မသိပါဘူ။ကျမလည်း အရမ်းကောင်းနေတာနဲ့ အသံထွက်မှာဆိုးလို့ အံကြိတ်နေရတယ်။ “ခံလို့ကောင်းလား စောက်ပက်ပြဲမ” “နင့်စောက်ပတ်ကြီးကို ငါလက်နဲ့ လိုးပေးတာ ကောင်းလား ခံလို့ ကြိုက်လား” “နင် အလိုးခံရတာ ကြိုက်ရင် ကားပေါ်က ဆင်းမှ ငါလီးကြီးနဲ့ နင့်စောက်ပက်ကြီး မယားနိုင်အောင် စောက်ပက်ထည်း ဖွာထွက်အောင်ကို လိုးပေးမယ်” ပြောပြီး အဲ့လူကြီးထွက်သွားတယ်။ကျမလည်း ကြည့်လိုက်တော့ ဆင်းရမယ်မှတ်တိုင်း ရောက်လို့ ကပျာကယာ ပြေးဆင်းလိုက်တယ်။‌ဟင်း သွားပြီး အဲ့လူကြီးက ဒီမှတ်တိုင်မှာ ဆင်းတာပါလား။‌ယောင်းရမ်းပြီး အဲ့လူကြီး ငှေးကြည့်မိနေတုန်း —
“စောက်ကောင်းမ တော်တော် ခံချင်နေပြီးလား ငါလိုးပေးတာကို ခံချင်လို့လား ငါ့လီးကြီးကို ကြိုက်လို့လား” “ငါလိုးတာ ခံချင်ရင် ဒီနေရာမှာ‌စောင့် နောက်နှစ်နာရီလောက် ကြာရင် ပြန်လာခဲ့မယ် ကြားလား” ပြောလည်း ပြီးရော့ အဲ့လူကြီးလည်း လှည့်ထွက်သွားတယ်။ပြောခံလိုက်ရတဲ့ စကားကြောင့် မိုးမှင်တက်သွားတယ် ။ ကျမကပဲ အရှက်မရှိ ခံချင်လို့ လိုက်လားတယ် ထင်သွားပြီ။ ကျမလဲနေရာကမရွေ့နိုင်တော့လောက်အောင်ဖြစ်သွားတယ်။လူက ရှက်ပြီး ပူထူ‌နေတယ်။ကျမ အော်ငိုချင်စိတ်ပေါက်တယ် တကယ်ပါပဲ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အပြန်ကျ ကိုကို လားကြိုးနိုင်ရင် နိုင်မှာပါ။အဆင်မပြေရင် taxi နဲ့ ပြန်မယ်။‌နောက်ဆုံး ဒီမှတ်တိုင်း မလားပဲ တခြား မှတ်တိုင် သွားရင် ပြန်မ‌တွေ့ရတော့ပါဘူး။ငါလည်း လိုင်းကားbus မှ စီတာမှမဟုတ်တာ ဒီလူ ဒီအဖြစ်အပျက်က ကျမကို ဘယ်သူမှ သိတာမှ မဟုတ်တာလို့ တွေးပြီး ကိုယ်ဘာသာ စိတ်ဖြေသာအောင် တွေးရင်နဲ့ ဒေါ်လေးစီ လျောက်လားခဲ့ပါ‌တော့တယ်။
ဒေါ်လေးဆီက ပြန်လားတော့ အားတစ်ခုခုက မိုးကို အဲ့လူကြီးဆီ တွန်းပို့နေသလိုပဲ။ အဲလိုနဲ့ အဲလူကြီးနဲ့ နောက်ဆုံးဆုံခဲ့တဲ့ မှတ်တိုင်ဆီကိုရောက်လားပါတော့တယ်။အဲ့လူကြီး ကရှိမနေပါဘူး။ကိုကို ဆီ ကိုလည်း ဖုံးဆက်လာ မကြိုးခိုင်မသလို။taxi လည်းမငှားဖြစ်။ bus ကားလာလည်း တက်မစီးဖြစ် ဘာလုပ်လို့ လုပ်မိနေမှန်မသိ ရပ်နေမိတယ်။ ဦးကိုကိုကြီး လည်း သူငယ်ချင်းနဲ့တွေ့ပြီး ပြန်မယ်ဆို‌ပြီး ခုနမှတ်တိုင်ကို ပြန်ထွက်လားခဲ့တယ်။ကြိုက်ကုန်းမလေး အကြောင်းတွေ မိပေးမယ် စောင့်နေမယ် လိုတော့ မထင်မိ‌တော့ဘူး။မှတ်တိုင်လည်း ရောက်ရော့ ကြိုက်ကုန်မလေးက ရပ်စောင့် နေတယ်။‌တော်တော် ချီးကျူးရမယ် စအကြာကြီးတောင် စောင့်ပေးနေသေးတယ်။ တခြာသူနဲ့ လိုက်မကုန်ပဲ ငါစောင့်နေသားဟ။ငါ့လီးကြီး ကြိုက်သွားတာနေမယ်။တော်တော်ယားနေလို့ ဖြစ်မယ်။ရောက်လာမှတော့ မတတ်နိုင်ဘူး ဖာမချပေ့မယ်။ဒီ ကြိုက်ကုန်မလေးကတော်တော် သန့်ပါတယ်။
ဦးကိုကိုကြီးလည်း ပြုံးလိုက်ရင်း စောင့်နေတယ့် ရှက်သလိုလို ခေါင်းကိုငုံ့ပြီး ရပ်နေတဲ့ကြိုက်ကုန်းမ‌ကို ဘာမှပြောမနေတော့ပါဘူး လက်ကို ဆွဲ‌ခေါ်ပီး taxi ငှားလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ အနီးဆုံးတည်းခိုခန်းကို သွားလိုက်တယ်ပေါ့ ။ တည်းခိုခန်းထဲရောက်တော့မှ ကြိုက်ကုန်းမ ကို‌သေချာကြည့်မိတော့တယ် တော်တော်ဆိုမှ တော်တော် ချောချောလှလှလေး ရုပ်လေးက မသိရင် တကယ့် အဆင်အတန်းရှိရှိလေး ဘာလို့များ လူတကား နဲ့ လိုက်ခံ‌နေလည်း မသိဘူး။ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်ကလည်း ပြောစရာ မရှိ ဝဠ်‌ကြွေးလား မသိဘူး။ငယ်ငယ်လေး ဆိုတော့ သန့်‌လောက်ပါတယ်။ ကွန်ဒုံမသုံးတော့ဘူး ပလိန်ပဲ ချမယ်ကွာ လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ကြိုက်ကုန်မကို အနား ဆွဲခေါ်လိုက်ရင် နို့လေတွေကို ကိုင်ကြည့်မိတယ်။မချင်မရဲ ဖြစ်လားတာနဲ့ ဖင်ကို လက်ဝါကြီးနဲ့ တဖြန်းဖြန်း သုံးချက်လောက် ရိုက်လိုက်တယ်။
ဖြန်း—ဖြန်း—ဖြန်း… ကြိုက်ကုန်းမ က ငြိမ်းနေတာပဲ မိုက်တယ်ဟ စိတ်ကြိုက်လိုး လိုးလို့ရလောက်တယ် လို့တွေးရင် မေးလိုက်မိတယ်။ မင်း နာမည်း ဘယ်လိုခေါ်လည်း ” မိုးသဲဖြူပါ” “လူလေးကော နာမည်လေးကော လှသာပဲ” “နင် ဒီလို လိုက်ကုန်းနေတာ ကြာပြီးလား” “ရှင်” “ကြိုက်ကုန်ဖြစ်နေတာ ဘယ်လောက်ကြာပြီးလည်း မေးတာ” “ကျမ အဲ့လို မိန်းမ မဟုတ်ပါဘူး” “လီး မဟုတ်ပါလား လူကြားထည်း လူတွေကြည့်နေတာတောင် နင်မရှက်မကြောက် အလုပ်ခံ နေသေးတာ” “မဟုတ်ပါဘူး” “ဘာ မဟုတ်ပါဘူးလည်း မေးလိုက်ရင် ဝန်ခံတာ မရှိဘူး” ဘယ်သူမှန် မသိတဲ့ လူနဲ့ ခံချင်လို့ စောင့်နေပြီးတည်းခိုးခန်တောင်း လိုက်လာပြီးမှ လီး မဟုတ်ပါဘူးလား “ “ဖာသည်မ” “နင် က ကြိုက်ကုန်း မဟုတ်ရင် ဖာသည်းမလား” “ဖာသည်မ ဆိုလည်း ပေးစရာ ပိုက်ဆံမရှိဘူး” “ရှိလည်း မပေးနိုင်ဘူး အလကားပဲ လိုးမယ်” “ကြားလား ကောင်းမ” “ပြန်ဖြေလေ” “ဟုတ်…ဟုတ်ကဲ့…” “လာစမ်း .ဖာသည်မ..ငါဘောင်ဘီး လာချွတ်ပေး” “ပြီးရင် နင် စောက်ဖုတ်ကို လိုးမယ် ငါလီးကြီး တောင်လာအောင် သေသေချာချာလေး စုပ်‌ပေးစမ်း” ကြိုက်ကုန်မက ရိုရိုကျိုးကျိုးနဲ့ ကျနော်ဘောင်ဘီးကို လာချွတ်ပေးနေတယ်။ အရမ်းမိုက်တယ်ဗျာ ချောချောငယ်ငယ် လှလှ ဆော်ကို ပြောချင်သလိုပြောပြီး ခိုင်းချင်းသလိုခိုင်း နေရတဲ့ဖီလ်ဘယ်လို ပြောပြရမှန်ကို မသိဘူး။ကြိုက်ကုန်းမက ဘောင်ဘီးချွတ်ပေးပြီး ကျနော် လီးကြီးကို စိုက်ကြည့်နေတယ်။ကျ‌နော် လီးကြီး ထိပ်ကဒစ်ခေါင်းကလဲ အတော့်ကိုကြီးပါတယ်။ငါလက်မခွဲ‌ကျော်ကျော်သာ ရှည်ပေးမယ် လုံးပတ်က တုပ်ပါတယ်။လီးကြီးကို စိုက်ကြည့်နေတာ သဘောကျပေးမဲ့။ကျနော်လည်း စိတ်မရှည်တော့ပါဘူး.—
.”ဟဲ့…ဘာလုပ်နေတာလဲ လီးမမြင်ဖူးတာ ကျနေတာပဲ…လီးစုပ်ပေးပါဆိုနေ လာခဲ့စမ်း” “ဟုတ် လာပါပြီ” “ဘယ်လိုလဲ ကောင်မ ငါ့လီးကြိုက်လား “ “လာလာ နင့်စောက်ဖုတ်ကို ကွဲအောင်လိုးပေးမဲ့ ငါ့လီးကြီးကို လာပြီး သေချာစုပ်စမ်း “ “ပြွတ်-ပြွတ်– ပြွတ်__ ပလွတ် -ပြွတ်” “အားးး ရှီး ကောင်းလိုက်တာကွာ ကောင်းမ လျှာပါ သုံးစမ်းပါဟ “ ကြိုက်ကုန်းမ က ကျနော် လီးကို လျှာနဲ့ ယက်လိုက် စုက်လိုက် အာရပါရ ပယ်ပယ်နယ်နယ် စုပ်ပေးနေတယ်။ကောင်းလိုက်တာဗျာ။ကျနော်လည်း ငုပ်တုပ်လေ ကျနော်ရှေ့မှာ ထိုင်နေတဲ့ ကြိုက်ကုန်းမ စောက်ဖုတ်ကို ခြေမနဲ့ ပွတ်ပေးလိုက်တယ်။အရည်တွေရွဲနေတာပဲ။ “ရှီး…ကောင်းလိုက်တာဟာ…ငါနင့်ကို လိုးချင်လာပြီ.. .လီးစုပ်တာတော်လိုက်တော့..ဖာသည်မ..” ကျနော် ပြောနေတာကိုတောင် ကြိုက်ကုန်းမက လီးကို အရသာတွေ့ပြီ လုံးဝကို မလွှတ်ပဲ… ဆက်စုပ်နေပါ‌သေးတယ်… “ဟာ..ဒီကောင်မ လိုးပါမယ်ဆို…”
“တချီလိုးပြီးရင် ထပ်စုပ်ရမယ်” နင့်ပါးစပ်ထဲက မချွတ်တန်းစုပ်ရမယ်..” “ဟာ ပြောမရအုံး ဟာ” ဆံပင်ကိုဆွဲပြီး မလွှတ်တမ်းစုပ်နေတယ့် ကြိုက်ကုန်းမကို ပါးကိုနှစ်ချက် ဆင့်ရိုက်ပြစ်လိုက်တယ်။ “ဖြန်း–ဖြန်း” ဒါတောင် ကြိုက်ကုန်မက ကျနော်လီးငုံးထားရင် ခန ရပ်သွားတယ်။လီးကိုတော့ မလွှတ်ပေးသေးဘူး။မထူးတော့ပါဘူး ဒီလောက်ဖြစ်လှတာ– “ဒီလောက်စုပ်ချင်တယ် ဟာမ.ရော့ကွာ…အဲ့မယ် အင့်..အင့်..စုပ်…စုပ်စမ်း” ပြောပြောဆိုဆို ဆံပင်ကိုကိုင်ပြီး ပါးစပ်ထဲကို အဖုတ်ကို လိုးသလို ပင့်ပင့်ပြီးလိုး‌ပေးလိုက်တယ်… “အု…အွတ်…ဂွပ်…ဂွပ်…” ကြိုက်ကုန်းမ အနေနဲ့အတော်ကို ခံရခက်သွားမယ်ထင်တယ် မျက်ရည်တွေလဲထွက် လာသလို..အာခေါင်ထဲထိ လီးကြီးတဆုံးထိုးလိုက်တော့ ခံစားရခက်တဲ့ဝေဒနာကြောင့်…ဝူဝူဝါးဝါးနဲ အတော်ကိုနာကျင်သွားပြီး…ရုန်းဖယ်ဖို့ လုပ်လားတယ်…
“ဘာအခုမှ ရုန်းတာလဲ…” “နင်ပဲစုပ်ချင်တယ်ဆို..” .”စုပ်လေ…ရော့ရော့.နင့်ပါးစပ်ကိုအပီလိုးပစ်မယ်ဟာ.ရော့..ရော့” ကြိုက်ကုန်းမ အတင်းရုန်းပြီး ဘယ်လိုမှ မခံနိုင်တာတွေ့တော့မှ… “လာခဲ့…နင့်စောက်ဖုတ်ကို အသေလိုးပစ်မယ်…” “…အဟင့်အဟင့်…” ငိုသလိုလို ရယ်သလိုလိုနဲ့ အသံက ကျနော်ကို ဖီလ် တက်လာစေတယ်။ ကြိုက်ကုန်းမဆံပင်ကနေဆွဲကိုင်ပြီး…တရွတ်တိုက်ဆွဲခေါ်ပြီး အိပ်ယာ‌ပေါ်တွန်းတင်လိုက်တယ်။အဝတ်အစာတွေ ချွတ်ပေးတော့ မူသလိုလို လာလုပ်‌နေ‌သေးတယ်။ “ငါလုပ်သမျှ ငါခိုင်းသမျှ အေးအေးဆေးဆေးနေစမ်း ငါကြမ်းမိရင် အကုန်ဆွဲဖြဲလိုက်လို့ ပြန်စရာမရှိဘူးဖြစ်သွားမယ် “ အတွင်းခံ ဘရာနဲ့ ပင်တီသာ ကြိုက်ကုန်းမ ကိုယ်လုံးမှာ ကျန်တော့တယ်..ကျနော်လည်း ချွတ်ရတာပျင်းလားတာနဲ့ “အခု…နင့်မှာ ဒါပဲကျန်တော့တယ်…နင့်ဘာသာ ချွတ်မလား..ငါဆက်ချွတ်ပေးရမှာလား..”
“ကျွန်မ ဘာသာချွတ်ပါ့မယ် “ “အေး..အာ့ဆိုလဲ သဘော..ဖြေးဖြေးချင်းချွတ် ဟိုဘက်လှည့်ပြီးချွတ်..ဒါမှ နင့်ဖင်တုံးကြီးတွေကို ကြည့်ရမှာ” “ဟုတ်..ဟုတ်ကဲ့ပါ” ကျနော်ကို ကျောပေးပြီး…ပင်တီကို ဖြေးဖြေးချင်းဆွဲချွတ်‌နေတယ်..ကြိုက်ကုန်းမ ဖင်က အိချောပိုလောက်ကို ကိတ်ပါတယ်… ဖင်အပြောင်သားနဲ့ တင်ပါးကြီးနှစ်ဖက် ဝင်းဝင်းအိအိ ထွက်လာတာကို မြင်ပြီး ကျနော် မနေနိုင်ဖြစ်လာတယ် “တောက်! ဖင်တုန်းကြီးတွေက အယ်နေတာပဲကွာ..နောက်ကနေ ကုန်းခိုင်ပြီး စောင့်လိုးလိုက်ရရင်တော့ ဟင်းဟင်း” ပြောရင်း ဖင်ကြီးကို အသာဆွဲဆိတ်လိုက်ရာ ဖင်တုန်းကြီး တွန့်ကနဲဖြစ်သွားတယ်။ “လေးဘက်ထောက် ဖင်ကို ထောင်နေအောင် ကုန်းထားစမ်း” ဒီလိုမျိုးလား “ “အေးဟုတ်တယ်” ကျနေက မလိုးသေးပဲ လီးနဲ့း အဖုတ်ကို ပွတ်နေတော့ “
“အားး ရှီး ရှင်ကျမကို သတ်နေတာလား လိုးပေးပါတော့ရှင် ဘယ်လိုမှမခံစားနိုင်တော့ဘူး တောင်းပန်ပါတယ် အဟင့်ဟင့်” “ဟား စောက်ကောင်မ ရွလိုက်တာဟာ အေး ပီးမှ တော်ပါတော့မလုပ်နဲ့ နင်လိုချင်တဲ့ ငါ့လီး ရော့ဟာ” ပြောပြောဆိုဆို အရမ်ထန်းနေတဲ့ ကြိုက်ကုန်မ အဖုတ်ထည်း လီးကြီးကို မညှာမတာ တစ်ချက်ထည်း ဆောင့်ထိုးထည့်လိုက်တယ်။ ” ဗြစ်ဗြစ် ဗြွတ်ဗြွတ်” ဗြစ်ဗြစ် ဆိုပြီး ကျပ်ကျပ်တည်းတည်း ဝင်သွားတာ။လီးဝင်တာနဲ့ တုန်ခါပြီး ကော့တပ်ပြီး ကြိုက်ကုန်းမ ပြီးသွားတယ်။တော်တော်ထန်နေတာပါလား။လီးထိပ် လဒစ်တောင်နာသွားတယ်။ကျပ်စီးနေတာပါလား။ဒါတောင် အရည်က အိုင်ထွက်နေတာ။သူတဆက်ဆက်တုန်ပြီး ပြီးနေလို့ လီးကြီးတဆုံး ထိုးထည့်ပြီး ခနစိမ်ပေး ထားလိုက်ရင် အဲ့လောက်ကျပ်နေတော့ မသက်ာလို့ မေးလိုက်တယ် “ဖာသည်မ နင်ဘယ်‌ခါ ခံဖူးတာလည်း ကျပ်စီးနေတာပါလား” “ဒါနဲ့မှ သုံးခါ နေဖူးတာပါ” “လီးနေဖူး လိုးခံဖူးတာလို့ပြော” “ဟုတ် ကျမရည်းစားနဲ့ နှစ်ကြိမ်း လိုးခံဖူးပြီး ရှင်နဲ့ တစ်ကြိမ်း လိုးခံဖူတာပါ” “ဪ ခုမှ ကြိုက်ကုန်း စဖြစ်တာလား ကောင်းတယ် ငါက ကြိုက်ကုန်းမှာ ဈေးဦးပေါက်စဖွင့်တာပေါ့ ဟုတ်လား ဖာသည်မလေး” “ဟုတ်ကဲ့ ရှင့်” ကြိုက်ကုန်းမ တဆက်ဆက်တုန်ရင် ပြီးတာငြိမ်းသွားပြီး ဆိုတော့မှ နို့တွေ ဆွဲပြီး တဖန်းဖန်း အသကုန်း တက်ခွ ဆောင့်လိုး ပေးလိုက်တယ်။
“အင့်ဟာ ဖာသည်မ ဗြစ်ဗြစ် ဘွတ် ဘွတ် “ “အသံ ထွက်ပြီး ခံလေ ကောင်းမ ငြိမ်မနေနဲ့” “အား ရှင့်လီးက ကျမ အဖုတ်ထဲမှာ အပြည့်ပဲ” “အား” ” အရမ်း ဆောင့်တာပဲ “ “ရှီး “ “ကောင်းလိုက်တာ “ “ဆောင့်ပါ” ” အား” ‌”ကောင်းတယ် ခုလို အသံထွက်ပြီး ခံရတာ ကောင်းလိုက်တာ အရင် ကိုကို နဲ့ ငြိမ်ငြိမ် လေး လိုးခံရတာနဲ့ ဘာမှ မဆိုင်ဘူး” “နောက် အသံထွက်ပြီး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲ ခံတော့မယ်” “ဗြစ်ဗြစ် ဒုတ် ဒုတ် ဘွတ် ဘွတ် ဗြွတ်ဗြွတ်” “အား ဟင့်ဟင့် အအ “ “အားး ကောင်မ စီနေတာပဲ နင့်အဖုတ်က “ အရည်တွေ အရမ်းရွဲနေတာနဲ့ စောက်ရည်တွေနဲ့ ပေပွနေတယ်လီး ကို အဖုတ်က ခနချွတ်ပြီး ထပ်စုပ်ခိုင်လိုက်တယ်။ “ကောင်မ လားစမ်း နင့် စောက်ဖုတ်ကို လိုးထားတဲ့ လီးကို စုပ်စမ်း “ အဖုတ်ထဲက အရည်တွေနဲ့ ပေပွနေတဲ့ လီးကို မရွံ မရှာ သူပါးစပ်နဲ့ ငုံလိုက်စုပ်လိုက် လုပ်ပေးရှာတယ်။ “ပြွတ် ပြွတ် ပလပ်ပလပ် ပြွတ် ပြွတ် ပလပ်ပလပ်” “အား ကောင်းတယ်ကွာ နေဦး ငါထပ်လိုးဦးမယ် ဒီတခါ ပက်လက်လှန်လိုက် “ “ဟုတ်” “အင့်ဟာ ဖာသည်မ ဘွတ် ဘွတ် “ “အား အဟင့် ဟင့် အ အ “
ဖာသည်မကို ညှာမနေတော့ဘူး နို့တွေကိုပါ ခပ်ကြမ်းကြမ်း ဆုပ်ကိုင် ရင်း နို့တွေ စို့ရင်း အဆုံးထိ ဆောင့်ဆောင့်ပြီး အသကုန်လိုးပေးလိုက်တယ်။အဖုတ်အတွင်းသားတွေ ပွစိပွစိနဲ့ လီးကြီး ကို ပြန်ညစ်ပေးတယ်။ကောင်းလိုက်တာဗျာ။ “ဗြစ်ဗြစ် ဒုတ် ဒုတ် ဘွတ် ဘွတ် ဗြွတ်ဗြွတ်” ” ဗြစ်ဗြစ်ဘွတ်ဘွတ် ပြွတ်ပြွတ် ဘွတ် ဗြစ်ဗြစ်” “ကောင်းလိုက်တာ နင့်နို့တွေ ကြီးလိုက်တာ လုံးပြီး တင်နေတာပဲ ကိုင်လို့စို့လို့ ကောင်းတယ် အား ဟုတ်တယ် အဲလို နင့်စောက်ဖုတ်နဲ့ ငါ့လီးကို ညှစ်ပေး ကောင်းတယ်ကွာ ဖာသည်မ “ “ဟင့် အအ ကျမ ပြီးတော့မယ် အား ကောင်းလိုက်တာ လိုးလိုး” “အား အင့် “ ” ပြွတ်ပြွတ်ပြွတ် ပြွတ် “ “ဗြစ်ဗြစ် ဒုတ် ဒုတ် ဘွတ် ဘွတ် ဗြွတ်ဗြွတ်” “ပြွတ် ပြွတ် ငါလဲပီးချင်ပီ” လီးကို အဖုတ်ထဲက ချွတ်လိုက်ပြီး သူပေါင်ကို ဖြဲပီး ကျနော်လက်နဲ့ အစိကို ခြေလိုက် ပွတ်လိုက် လုပ်ပေးလိုက်တယ်။ ကြိုက်ကုန်းမလည်း ကော့ပျံနေအောင် ကောင်းနေတယ်။အဖုတ်ထဲကို လက်သုံးချောင်း ထိထည်ပြီး ခပ်ကြမ်းကြမ်း လက်နဲ့ လိုးပေးပြစ်လိုက်တယ် ။ ကော့ပျံလန်ပီး အရည်တွေ ပန်းပန်းထွက်ပီး ပီးသွားတာ ဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက်နဲ့ နေတာပဲ။အမောဖြေ နေတာ ခန စောင့်လိုက်ပြီး။ “ဖာသည်းမ အမောဖြေ မနေနဲ့ ငါ့ လီးလာစုပ်အုံး”
“ဟုတ်” ဆို ကုန်းထလာပြီး လီးကို လာကုန်းစုပ်တယ်။အပေး ကတော့ ကျနော်တောင်စွဲမက် သွားတယ်။ “ပြွတ်ပြွတ်ပြွတ် ပလပ်ပြွတ်” “ကောင်းလိုက်တာ အဆုံးထိစုပ်စမ်းပါ ခွေးမ ငါအားမရတော့ဘူး” ပြောပြီး ခေါင်းကို ဖမ်းချုပ်ပီး သူ ပါးစပ်ထဲကို အဖုတ်ကို လိုးသလို မညှာမတာ‌ဆောင့်လိုးလိုက်တယ်။လီးကို အာခေါင်ထိရောက်‌အောင်။ ခေါင်းကို ပေါင်ရင်ထိ ကပ်အောင် အတင်းဆောင့်ထိုးပြစ်လိုက်တယ်။ကြိုက်ကုန်မ မခံနိုင်လို့ အတင်းရုန်းပေမဲ့ ကျနော်ချုပ်ထားတဲ့ အားကိုမလွန်ဆန်နိုင်ပါဘူး။ အချက် ၂၀ လောက် ပါးစပ်ကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းလိုး‌ပေးပြီး လရည်ထွက်တော့မှာမို့ အာခေါင်ထိစိုက်ချရင်း လရည်တွေပန်းထည့်လိုက်တယ် ။ “ဖာသည်မ အကုန်မြိုစမ်း တစက် မှ မဖိတ်စေနဲ့” “အွတ် အဟွတ် ဂလု အွတ် ဂလုဂလု” ကျနော်လည်း အားရသွားမှ သူပါးစပ်ထဲက လီးကို ချွတ်ပေးလိုက်တယ်။ကြိုက်ကုန်မကတော့ လရည်တွေ အကုန်သောက်လိုက်ရလို့ အရမ်းမောနေတယ်။ “လီး သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပေးအုံး နင့်ပါစပ်နဲ့ ‌” “နင့်စောက်ရည်တွေ လရေတွေပြောင်းအောင် ယက်အုံး” “ပြွတ်ပြွတ်ပြွတ် ပလပ်ပြွတ်” အင်း ရပြီး နင် အင်ကျီနဲ့ သုတ်ပေးအုံး ဟုတ် “ကဲ မင်းပြန်ချင်ပြန်လို့ရပီ ဖုံနံပါတ်ပေးခဲ့အုံး ငါဖုံးနံပတ်လည်း ယူသွား”
“နောက် ငါလိုးချင်တယ် အချိန် ခေါ်လိုးမယ် ကြားလာ” “ဟုတ်ကဲ လာပါမယ်ရှင်” “အော်ဒါနဲ့ မင်းကို လိုးသွားတဲ့ငါ နာမည် ဘယ်လို မှတ်မလည်း ကိုယ့်ကိုလိုးတာဘယ်သူမှန်းလည်း မင်းမသိဘူးမလား” “ထားပါ မင်းအဆင်ပြေသလို မှတ်လိုက်” “မင်းကိုတော့ ကြိုက်ကုန်းမ လို့မှတ်ထားမယ်” “ဒါလောက်နံနံစော်စော် Bus စီပြန်လို့တော့ ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်” ကဲ ငါပြန်ပြီး တာ့တာ့ ကြိုက်ကုန်းမလေး။ crd;
Tags:Bus ပျေါက ကွိုကျကုနျးမ